NEWS COLLECTION: February 2015
မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
မြောက်ဦးရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ယနေ့ မြောက်ဦးတွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သိန်းက ပြောသည်။
“ဒီအဖွဲ့ကို ပထမဖွဲ့တဲ့အချိန်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရထားလမ်းကိစ္စပေါ်တဲ့အခါ အလောတကြီးနဲ့ဖွဲ့ခဲ့ရတယ်လေ။ အခုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကလည်း အသိအမှတ်ပြုဖို့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ကနေ မြောက်ဦးမြို့မှာ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကို တရားဝင်ဖြစ်အောင်အတွက်၊ ခိုင်ခိုင်မာမာဖွဲ့ဖို့အတွက်ပြောလို့ ကျွန်မတို့ပြန်ဖွဲ့လိုက်တာပါ”ဟု ယင်းက နိရဉ္စရာသို့ပြောသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁ နာရီအချိန်က မြောက်ဦးမြို့ရှိ နန်းသားကန်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် မြို့ပေါ်မှ သံဃာတော်များနှင့် လူထုပရိသတ် ၇ဝ ခန့်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တက်ရောက်ခဲ့သူများက ဆိုသည်။
ယင်းအဖွဲ့အနေဖြင့် ယခု ပြည်နယ်အစိုးရ၏အသိအမှတ်ဖြင့် တရားဝင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်း မြို့၏ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဒေါ်ခင်သိန်းက ထပ်ပြောသည်။
“ဒီအဖွဲ့ကို အရင်သူတို့အသိအမှတ်မပြုခင်လည်း ကျွန်မတို့ အမြဲတမ်းလုပ်နေတာပဲလေ။ အခုအသိအမှတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်း ပိုပြီးတော့ အဆင်ပြေလာမယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ ထဲထဲဝင်ဝင်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ လုပ်ရတာပိုကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်”ဟု ယင်းက ဆိုသည်။
ယခုအဖွဲ့အားပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဒေါ်ခင်သန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦးဖြစ်သော ဦးသန်းမြင့်နှင့် ဦးမောင်ညွန့်စိန်နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်သိန်းလှိုင်တို့မှာ ယခင်ကဖွဲ့စည်းထားသည့်အတိုင်း အပြောင်းအလဲမရှိခဲ့သော်လည်း အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သူများ အဖွဲ့တွင် ပါဝင်လာခြင်းမရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။
“မြောက်ဦးမြို့မှာ လက်ရှိ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုလက်ရာတွေ၊ ရှ့ဟောင်းသမိုင်းဝင် တံတိုင်းတွေနဲ့ ပုထိုးတော် ဖျက်စီးခြင်းခံနေရတာတွေကို ဘယ်လိုတားဆီးကာကွယ်ကြမယ်ဆိုတာတွေလည်း ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်”ဟု အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် မြောက်ဦးမြို့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒြပ်ရှိယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးကို တတ်နိုင်သလောက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟုလည်း ဒေါ်ခင်သန်းက ပြောသည်။
Facebookမှာ တပ်မတော် သရော်ပုံတင်မိတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတဦး အဖမ်းခံရ
လူမှု ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာ တပ်မတော်ကို သရော်ထားတဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ပြုပြင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ တခု ကို တင်မိလို့ မုံရွာမြို့ခံ ဓာတ်ပုံဆရာ ကိုအောင်နေမျိုးကို အရေးပေါ် စီမံမှု အက်ဥပဒေနဲ့ မုံရွာမြို့မ ရဲစခန်းက အရေးယူလိုက် တယ် လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။
မုံရွာမြို့နယ် ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူး မြင့်လွင်က Facebook မှာ ပုံတင်တဲ့ ကိုအောင်နေမျိုးနဲ့ အပေါင်းအပါ တွေကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ် စီမံမှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (က)/(င) တို့အရ အမှုဖွင့် အရေးယူပေးဖို့ မုံရွာ မြို့မ ရဲစခန်းကို တင်ပြခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ တိုင်ကြားစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ နံနက် ၁ နာရီလောက်မှာ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အယောက် ၂၀ လောက်ဟာ ကိုအောင်နေမျိုး ဖွင့်ထား တဲ့ မုံရွာမြို့က FOTO စားသောက်ဆိုင်ကို ရောက်ရှိလာကြပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်မှုရှိတယ်လို့ တိုင်ကြားသူရှိတဲ့အတွက် လာရောက် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ မိသားစုဝင်တွေက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ကိုအောင်နေမျိုး ရဲ့ မိခင် ဒေါ်ခင်ဆင့်က “မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်တဲ့လူရှိတဲ့ အတွက် လာစစ်တာ ဆိုပြီး တဆိုင်လုံး မွှေနှောက်သွားတယ်။ မူးယစ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်တာဆိုလို့ ဘာမှလည်း မတွေ့ဘူး”လို့ ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားပြီး Facebook မှာ ပျံ့နှံ့လာတဲ့ ရဲမှူး မြင့်လွင် ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုး တိုင်ကြားထားတဲ့ တိုင်စာထဲမှာတော့ Aung Nay Myo Facebook အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ စီစဉ်သူ – ဦးသိန်းစိန် ၊ ဝတ္ထု – သန်းရွှေ၊ ဇာတ်ညွှန်း – ကြိုင်ကြိုင်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ စီစဉ်သည့် မိုးလုံးပြည့် ဝါဒမှိုင်းတိုက်သော ဇာတ်ကြမ်း ကွန်ဒုံ ရက် ၄၀ ဆိုတဲ့ ဓာတ်ပုံ Photoshop လုပ် ထားတဲ့ ပုံကြောင့် အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားခဲ့တာလို့ ပါရှိပါတယ်။
အခုလို ဖော်ထားခြင်းဟာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကို မေတ္တာပျက်စေရန်၊ စည်းကမ်း ဖီဆန်ရန်၊ အစိုးရရဲ့ ဝတ္တရား ဆောင်ရွက်မှုကို ယုတ်လျော့စေရန်၊ ထိခိုက်စေရန်၊ တားမြစ်စေရန်၊ အနှောင့်အယှက်ပြုစေရန်၊ ပျက်စီးစေရန်၊ မမှန်ကြောင်းသိရဲ့နဲ့ မမှန်သတင်းလွှင့်ရန် ကြံရွယ်ပြီး Facebook စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာလို့လည်း စွပ်စွဲထားပါတယ်။
တကယ်တော့ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အတွင်းမှာ တပ်မတော်နဲ့ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ တပ်တွေအကြား ရက် ၄၀ အကြာ တိုက်ခဲ့ရတဲ့ ကွမ်းလုံ တိုက်ပွဲကို သမိုင်းဝင် တိုက်ပွဲအဖြစ် ဂုဏ်ပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ “ကွမ်းလုံ ရက် ၄၀” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ကို “ကွန်ဒုံ ရက် ၄၀” ဆိုပြီး ဟာသ ဓာတ်ပုံ ဖြတ်ညှပ်ကပ် ပညာရှင်တဦးရဲ့ ဖန်တီးမှုက ၂၀၁၅ နှစ်ဆန်းပိုင်းကတည်းက Facebook စာမျက်နှာတွေဆီမှာ ပျံ့နှံ့နေတာပါ။
အဲဒီလို ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ် တော် နာယက သူရ ဦးရွှေမန်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် အမတ် ဦးလှဆွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ Facebook စာမျက်နှာတွင် အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်ဘက်က ဝါဒဖြန့် စာတွေရေးသားနေတဲ့ ရောင်နီဦး၊ ရဲမိုး တို့နဲ့ အတူ မန္တလေးက မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော် အရှင် ဝီရသူ လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်လည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစဉ်မှာ ကိုအောင်နေမျိုး အသုံးပြုနေတဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ ဟန်းဖုန်းနဲ့ ဆိုင်အတွင်း တပ်ဆင် ထားတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုပါ ဖြုတ်ယူသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းအချိန်ထိ ကိုအောင်နေမျိုး အသုံးပြုတဲ့ လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာဟာ အွန်လိုင်း ပွင့်နေတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ အာဏာပိုင်တွေက မွှေနှောက်နေဖွယ် ရှိတယ်လို့လည်း သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေက ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။
ကိုအောင်နေမျိုး ကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းကြည့်ရာမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း ရဲ တပ်ဖွဲ့ ကဖြစ်တယ်လို့ မုံရွာမြို့ပေါ်က ရဲစခန်းတွေက ပြောပေမယ့် မြို့ပေါ်ရှိ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့က သူတို့ ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းပါသေး တယ်။
အဖမ်းမခံရမီ ၂ ရက်လောက်ကတည်းက ကိုအောင်နေမျိုးရဲ့ဆိုင်ကို စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့ (စရဖ) အရာရှိတယောက် ရောက်လာပြီး သူ့အကြောင်းတွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းသလို ကိုအောင်နေမျိုးရဲ့ မိတ်ဆွေတွေထံမှာလည်း တဆင့် မေးမြန်းမှုတွေ ရှိကြောင်း အဖမ်းမခံရမီ နာရီပိုင်းအလို ဧရာဝတီ ကို ကိုအောင်နေမျိုးက ပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
“သူတို့က ကျနော့်ကို မျက်စိ ဆံပင်မွေးစူးနေတာ ထင်တယ်။ Facebook ပေါ်က ကိစ္စလောက်နဲ့တော့ ကျနော့်ကို မလုပ်လောက် ဘူး။ ကျနော်က ဒီမှာ ပညာရေး သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတွေကို ဆိုင်မှာ ထမင်းတွေ ဘာတွေ ကျွေးတာတွေရှိတယ်”လို့ အဖမ်းမခံရခင် နာရီပိုင်း အလိုမှာ ဧရာဝတီကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်ကြီးများကို မထိန်းသိမ်းပါက တိမ်ကောသွားနိုင်
သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်းဇုန်တွင် ကြံစိုက်ရန် မြေထွန်ရာမှ ရှေးဟောင်း ကုန်းတော် ခုနစ်ခု ပျက်စီးခဲ့ရဟု ဆို
ပြည်မြို့၊ သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်းဇုန်အတွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦး၏ ကြံစိုက်ရန် မြေထွန်ယက်ခြင်းကြောင့် ရှေးဟောင်းကုန်းတော် ခုနစ်ခု ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်မျိုးဝင်းက ပြောသည်။
''နောက်ထပ် အသစ်စိုက်ဖို့မြေကို တိုးချဲ့ပြီးထွန်တာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေးဟောင်းပျူတိုက်ထဲမှာ ကုန်းလေးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီထဲက ခုနှစ်ကုန်းလောက် သူတို့က ထွန်ထားတယ်။ ဒီကုန်း ခုနှစ်ကုန်းက အပေါ်ယံပျက်စီးပြီး အုတ်တွေထွက်လာတယ်။ အောက်က ပန္နက်တွေ တော့မထိသေးဘူး'' ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က ပြည်မြို့ တောင်ခွေးရဲကျေးရွာအုပ်စု၊ သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်းဇုန်၊ တောင်ဖြူ တိုက်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင် ဦးထိုင်ထိုင် ပိုင်ယာမြေများကို ကြံစိုက်ပျိုးရန် ထွန်ယက်ခဲ့သဖြင့် ဒေသခံများ၏ သတင်းပေးချက်အရ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်တွင် ရှေးဟောင်းသုတေသနက သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ရှေးဟောင်းကုန်းခုနစ်ခု ပျက်စီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးထိုင်ထိုင် က ''ကြံစိုက်ဖို့လုပ်တုန်း ကုန်းတွေပျက်တယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကြံခင်းတွေ မီးလောင်မှာ ဆိုးလို့ မီးတားဖို့ မောင်းရင်းနဲ့ အဲဒီ ဧရိယာအစပ်ကို ရောက်သွားတာပါ။ ရှေးဟောင်းက လာတားတော့ရပ် လိုက်ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ရှေးဟောင်းကုန်းတော် ပျက်စီးခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်စဉ်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် မြေပုံကြမ်းရေးဆွဲကာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ တစ်ဆင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ တင်ပြထားသည်ဟု လည်း ဦးကျော်မျိုးဝင်းက ပြောသည်။
ကြံစိုက်ပျိုးရန် မြေထွန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ပျူတိုက်၏ ထောင့်တစ်ခုမှ ကျောက်အရိုးအိုး သုံးပိုင်းတွေ့ရှိသည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
မတ်လတွင် မွန်ပြည်နယ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုမည်
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း လာမည့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို IFES (International Foundation of Electrical System) အဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့် လာမည့်မတ်လ ပထမပတ်မှ စာရင်း စတင်ပြုစုသွားမည်ဟု သိရသည်။
ပည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်းကို အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ကောက်ယူထားသည့် စာရင်းကို အခြေခံပြီး မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ စတင်ပြုစုမည်ဟု မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲမှ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဟိဏ်းလင်းထက်က ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီ IMNA ကို ပြောသည်။
“လူဦးရေစာရင်းက update ဖြစ်မှ မဲစာရင်းသွင်းလို့ရမှာ၊ မဲစာရင်းသွင်းတဲ့ အချိန်မှာလည်း အမျိုးအစား (၄) မျိုးခွဲထားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အခုစောစောပိုင်းမှာတော့ သုံးမျိုးကို အရင်ပြုစုသွားမယ်” ဟု ဦးဟိဏ်လင်းထက်က ပြောသည်။
ပထမ အမျိုးအစားသည် မြို့နယ်အတွင်းနေထိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စုစာရင်းရှိပြီး သတ်မှတ်ချက် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်၍ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်သူဖြစ်ရမည်၊ တတိယ အမျိုးအစားမှာ မှတ်ပုံတင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ် သုံးခေါက်ချိုးများရှိသော်လည်း မည်သည့်နေရာမှ သန်းခေါင်စာရင်းမရှိသူ သို့သော် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး မဲထည့်ရန် ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သူ၊ စတုတ္တအမျိုးစားမှာ မှတ်ပုံမရှိနှင့်အခြား မည်သည့်ကဒ်မှမရှိသူ သို့သော် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သူတို့ကို ဦးစားပေး ပြုစုသွားမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်သည့် မိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်တွင် တာဝန်မကျဘဲ တခြားမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဝန်ထမ်းတို့၏ စာရင်းကို မပြုစုသေးကြောင်း ဒုတိယအမျိုးအစားကို ရွေးကောက်ပွဲ ကြေညာပြီးမှသာ သီးသန့် စရင်းထည့်သွင်းပြုစုသွားမည်ဟု ကော်မရှင်က ပြောသည်။
ယခုအစောပိုင်းတွင် လဝက ပုံစံ ၆၆/၆ နှင့် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတို့၏ လူဦးရေစာရင်းကို ပြန်လည်စီစစ် ပြုလုပ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မုဒုံမြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ဦးက “ကျနော်တို့ရွာမှာတော့ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကောက်နေပါပြီး၊ အကြမ်းဖျဉ်းတော့ ပြီးနေပြီး၊ အခုအချောသတ်နေကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
အိမ်ထောင်စုစရင်းအတွင်း အသက် ၁၈ နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူ မဲပေးနိုင်သည့် လူဦးရေကို အဓိကထား ကောက်ယူနေကြောင်း အဆိုပါကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောသည်။
အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုရန် IFES အဖွဲ့မှ ကွန်ပျူတာ ၃၀ လုံး ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲရှိ မြို့နယ် ၂၀ မြို့နယ်မှ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ၆၅ ဦးတို့ကို သင်တန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မတ်လ ၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ စရင်းထည့်သွင်းပြုစုသွားမည်ဟု ဦးဟိဏ်းလင်းထက်က ဆိုသည်။
IFES အဖွဲ့မှ အဆိုပါသင်တန်းအတွက် ကွန်ပျူတာ ၃၀ လုံးကို ပထမအသုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒုတိယအသုတ်တွင် ကွန်ပျူတာ ၁၁၆ ကို ထပ်မံပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဟု သိရသည်။
တနိုင်ငံလုံး မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်း ပထမအဆင့်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ၎င်း၊ ဒုတိယအဆင့်ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ၎င်း၊ တတိယအဆင့်ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မတ်လအထိ၎င်း၊ စတုတ္ထအဆင့်ကို ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလအထိ၎င်း ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ လျာထားသည်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ရရှိလာသော အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကို IFES မှမဲဆန္ဒရှင်စာရင်ထည့်သွင်းမည့် ဆောဝဲလ်တွင် စုစည်းပြီး နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးချုပ်ရှိ ဆာဗာတွင် သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကော်မရှင်ခွဲသို့ ပြန်လည်ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို ယခုနှစ်မကုန်ခင် အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးအပတ် သို့မဟုတ် နိုဝင်ဘာလ ပထမအပတ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် အတိအကျကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်အောင်တွင် ကြွက် အန္တရာယ်ရှိနေ
မင်းအုပ်စိုး ရှေ့နေ၏ မေးခွန်းအချို့ တရားခွင်တွင် ပယ်ချခံရ
လူသတ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ မင်းအုပ်စိုး၏ အမှုအတွက် တရားလိုကို စတင်စစ်ဆေးရာတွင် တရားစွဲခံထားရသူ၏ ရှေ့နေမေးမြန်းသည့် မေးခွန်းအချို့ကို တရားသူကြီးက မေးမြန်းခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာမင်းအုပ်စိုး၏ အမှုအတွက် ပထမဆုံးရုံးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းအဖြစ် အမှုကိုတရားလိုပြု တိုင်တန်းထားသည့် တရားလိုဖြစ်သူဒဂုံမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာခံလင်းထွဋ်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ တွဲဖက်ခရိုင်တရားသူကြီး (၂) ကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဲအရာခံ လင်းထွဋ်ကို မေးခွန်းများ မေးမြန်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ တရားစွဲခံထားရဘက်မှ ရှေ့နေ၏ မေးခွန်းဖြစ်သည့် အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် အတူနေထိုင်သူများကို စစ်ဆေးပါက မင်းအုပ်စိုးက တေးနုရင်ကိုသတ်ခဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် မတော်တဆဖြစ်ခြင်းကို အတိကျ သိနိုင်ပါသလားဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ တရားသူကြီးက ယင်းမေးခွန်းစပ်လျဉ်း၍ ရုံးတော်မှ သက်သေသည် တရားလိုသာဖြစ်ပြီး အမှုစစ်မဟုတ်ခြင်း၊ မေးခွန်းမှာလည်း ထင်မြင်ချက်မေးခွန်းဖြစ်သဖြင့် မေးမြန်းခြင်းမပြုရန် အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။
ထပ်မံ၍ မင်းအုပ်စိုးသည် တေးနုရင်ကိုထိုးကြိတ်ခြင်း၊ ကန်ကျောက်ခြင်း၊ ကိုင်ဆောင့်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်ဟု စခန်းတွင် လာရောက်ဝန်ခံခဲ့ပြီး စခန်းမှသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ မင်းအုပ်စိုး၏ ထွက်ဆိုချက်နှင့်မှန်ကန်သဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုလျှင် မည်သည့်အချက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ရှင်းလင်းပေးရန် တရားစွဲခံထားရသူ၏ ရှေ့နေကမေးမြန်းခဲ့သည်။
တရားသူကြီးက ရုံးတော်မှ အဆိုပါမေးခွန်းသည် အပြန်အလှန်မေးရာတွင် တိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရှင်းပြခိုင်းခြင်းဖြစ်ရာ သက်သေမှ အဆိုပါမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေကြားပြီးဖြစ်သဖြင့် မေးမြန်းခွင့်မပြုပါဟု ပြောသည်။
မင်းအုပ်စိုးသည် တေးနုရင်ကို သေစေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲပေါ့ဆ၍သာ တေးနုရင်သေဆုံး သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင် တရားလိုက မိမိသည် မင်းအုပ်စိုး၏စိတ်အတွင်းသဏ္ဍန်ကိုမသိသဖြင့် မပြောနိုင်ပါဟုထွက်ဆိုခဲ့သည်။
တေးနုရင်သည် မင်းအုပ်စိုး၏ သရပါမဂ္ဂဇင်းတိုက်တွင် အခြားအမျိုးသမီး လေးဦးနှင့်အတူ နေထိုင်ခြင်းဖြစ် သော်လည်း အခင်းဖြစ်ပွားသည့်နေ့တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ၎င်း၏ နေအိမ်သို့ပြန်သွားသဖြင့် အမျိုးသမီးသုံးဦးသာရှိသည်ကို ဗဟန်းရဲစခန်းထံမှသိရပြီး ယခုရုံးရှေ့တွင်တရားစွဲခံထားရသူ၏ ရှေ့နေဘက်မှ အချက်အလက်နှင့်ကွဲပြားမှုများရှိနေသည်ဟု သေဆုံးသူ၏ အစ်မ၀မ်းကွဲတော်စပ်သူ မသင်းသင်းမူကပြောသည်။
" အမှုဖြစ်ပြီးဗဟန်းရဲစခန်းကသိရတာက အဲ့ဒီနေ့ကတေးနုရင်တို့နေတဲ့ အခန်းမှာ အခန်းဖော် သုံးယောက်ပဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်၊ အခုတစ်ဖက် ရှေ့နေရဲ့ပြောဆိုချက်ကလေး ယောက်ဖြစ်နေလို့ ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကို တင်ပြသွားမှာပါ၊ အခင်းဖြစ်ရပ်ကို သေဆုံးသူနဲ့ပြု လုပ်တဲ့သူသာသိနိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်ပါ၊ တစ်ဖက်ရှေ့နေရဲ့တစ်ဖက်သတ်ပြောဆိုမေးမြန်းချက်တွေကို လဲ အခုအချိန်မှာဘာမှမပြောချင်ပါဘူး၊ တရားရုံးက အမှန်တရားပေါ်ပေါက်အောင်ပဲ ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်။ " ဟုပြောသည်။
မနုနုရင်(ခ)တေးနုရင်သည် သရပါမဂ္ဂဇင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်မှာ ၇ နှစ်ဝန်းကျင် ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ၎င်းအလုပ်လုပ်သည့် သရပါမဂ္ဂဇင်းတိုက်သည် မင်းအုပ်စိုး၏နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိကာ မဂ္ဂဇင်းဖောင်ပိတ်သည့်ရက်များတွင် တိုက်၌ ပင်ညအိပ်လေ့ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အမှုဖြစ်စဉ်မှာပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ နံနက် ၂ နာရီခွဲဝန်းကျင်က ဗဟန်းမြို့နယ်၊ဗိုလ်ချိုရပ်ကွက်၊ ဖိုးစိန်လမ်းတွင်ရှိသည့် သရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုး၏နေအိမ်တွင် သရပါမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ မနုနုရင်(ခ)တေးနုရင်ကို လူမှုရေးကိစ္စမေးမြန်းရာမှ မေးမရသဖြင့် မင်းအုပ်စိုးထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်ခဲ့ရာမှ မနုနုရင်သေဆုံးခဲ့၍ ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်း ရဲအရာခံလင်းထွဋ်က တရားလိုပြု တိုင်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပက်သက်သည့် လူသေဆုံးသည်အထိရိုက်နှက်ခဲ့သည့် သရုပ်ဆောင်မင်းအုပ်စိုးကို ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဗဟန်းမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၅၁၉/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီးလာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ရုံးချိန်းထပ်မံစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ကော့စမွီတွင် မြန်မာ ၁ ဦး ထပ်မံအသတ်ခံရ
မကြာခင်ရက်ပိုင်းက မွန်အမျိုးသမီး ၁ ဦး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ထိုင်းတောင်ပိုင်း ဆူရတ်ဌာနီခရိုင် ကော့စမွီကျွန်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့ မနက်အစောပိုင်းက အသက် ၂၀ ကျော်အရွယ် မြန်မာအလုပ်သမား ၁ ဦး ထပ်မံ အသတ်ခံရတယ်လို့ ထိုင်းဒေးလီးနယူးစ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ကော့စမွီမြို့ ဘော်ဖွတ်ရပ်ကွက် နယ်မြေ ၆ ထဲမှာ လူ ၁ ဦးရဲ့အလောင်း တွေ့ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် မနက်မှာ သတင်းရရှိချက်အရ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း၊ မှုခင်းဆရာဝန်တွေ နဲ့အတူ သွားရောက်စစ်ဆေးရာမှာ ဖူးချဝိုင်စားသောက်ဆိုင် လမ်းဘေးမှာ အသက် ၂၀ ရွယ် လူရွယ်တဦး သေဆုံးနေတာ တွေ့ရတယ်လို့ ကော့စမွီအထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိက သတင်းထောက်တွေက်ို ပြောပါတယ်။
စစ်ဆေးချက်အရ သေဆုံးသူဟာ ဘန်ဒိုင်းစားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား ကိုသက်စိုး (အသက် ၂၂ နှစ်) ဖြစ်ပြီး ရင်ဘတ်မှာ ချွန်ထက်လက်နက်နဲ့ထိုးထားတဲ့ ဒဏ်ရာနှစ်ချက်၊ လည်ပင်းပြတ်လုနီးပါး ဓားဒဏ်ရာ၊ မျက်နှာမှာ ထိုးကြိတ်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ တွေ့ရှိတယ်လို့ စုံစမ်းရေးရဲအရာရှိက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူနဲ့နီးစပ်တဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေ မေးမြန်းရာမှာတော့ တဆိုင်တည်းမှာ အလုပ်လုပ်သူ ထိုင်းလူမျိုး နိုင်းနတ်တ၀တ်ကျန်ကြိုင်က သေဆုံးသူဟာ အရက်မသောက်၊ ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲ ရိုးသားကြိုးစားသူတဦးဖြစ်ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်တဲ့ညက မနက် ၂ နာရီ (ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇) ထိ အလုပ်ဆင်းပြီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပြန်သွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အခြားမိန်းကလေးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မယုဝေေ၀ရဲ့ ပြောပြချက်အရတော့ သေဆုံးသူဟာ မနက် ၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ မှာ သူ့ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး အဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်း အကူအညီတောင်းနေစဉ်မှာ ဖုန်းချသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအမှုမှာ အလောင်းဘေးမှာ တွေ့ရတဲ့ ဖိနပ်ရာတွေ၊ ဆိုင်ကယ်ဘီးရာတွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူသတ်သမားဟာ၂ ယောက်ထက် ပိုနိုင်ကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေထဲက ဖြစ်နိုင်ပြီး ကြိုတင်ချိန်းချက်ထားဟန်လည်းရှိကြောင်း၊ ပြဿ နာတခုခုကို ညှိနှိုင်းမရတာနဲ့ လက်စဖျောက်လိုက်ဟန်ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ခန့်မှန်းပြောဆိုပြီး တရားခံကို ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ဖို့ စုံစမ်းရှာဖွေနေတယ်လို့ ရဲအရာရှိကို ကိုးကားပြီး ဒေးလီးနယူးစ်သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကော့စမွီမြို့ ရခိုင်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့က ကိုသန်းရွှေကလည်း အသတ်ခံရ သူဟာ မွန်ပြည်နယ်ကလို့ပဲ သိထားပြီး နောက်ထပ်အသေးစိတ်သိရဖို့ မေးမြန်းနေဆဲပဲလို့ ဆိုပါ တယ်။
ကော့စမွီမြို့ ဘော်ဖွတ်ရပ်ကွက်ထဲမှာပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း အသက် ၂၂ နှစ်ရွယ် မချောငယ်ငယ်ဆိုတဲ့ မွန်အမျိုးသမီးတဦး အသတ်ခံခဲ့ရပြီး သူ့အလောင်းကို ဒီကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ကော့စမွီမြို့ ဘန်ရတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မီးသင်္ဂြိုဟ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလူသတ်မှု နှစ်ခုဟာ ဆက်နွှယ်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ခဲစက္ကူလုပ်ငန်းများ ပြည်ပ သွင်းကုန်ကြောင့် အခက်အခဲတွေ့
အမြန်လမ်းပေါ်မှ အဝေးပြေးကားကို လေးခွနှင့်ပစ်သူ ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် မောင်းနှင်နေသည့် ခရီးသည်မှန်လုံ အဝေးပြေးကား တစ်စီးကို လေးခွနှင့် ပစ်ခတ်သည့် အမျိုးသား တစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်၊ နံနက် ၁ နာရီခွဲခန့်က ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၅၈ အနီးတွင် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ယာဉ်မောင်း ကိုသူရမောင်းနှင်လာ သည့် ဝေဖြိုးအောင် ခရီးသည်မှန်လုံယာဉ်ကို လမ်းဘေးတွင်ရပ်နေသည့် လူတစ်ဦးက လေးခွဖြင့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် ယာဉ်၏ယာဘက်ဘေးမှန်နားကို ထိမှန်ခဲ့ပြီး ယာဉ်မောင်းက ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ စမိုးရဲကင်းသို့ အကြောင်းကြားခဲ့သဖြင့် ရဲကင်းစခန်းနှင့်ဇီးပင်သာ အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း စုံစမ်းချက်အရ ကားကို လေးခွဖြင့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့သူမှာ ရေတာရှည် မြို့နယ်၊ ကရင်ချောင်းကျေးရွာတွင်နေ ထိုင်သည့် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် အောင်ထွန်းဝင်းဟု သိရှိခဲ့ရ သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောင်ထွန်းဝင်းကို ဇီးပင်သာ အမြန်လမ်းမကြီး ရဲစခန်းက (ပ) ၅။၂ဝ၁၅၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၇၉-က ဖြင့်အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
အမဲနယ်မြေ သတ်မှတ်စရာအကြောင်း မရှိတော့ဟု တစည ဆို
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက နယ်မြေ မအေးချမ်း၍ မဲရုံဆောက်ခွင့်မရသည့် ဒေသများကို အမဲရောင်နယ်မြေအဖြစ် ဆက်လက်သတ် မှတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ကြောင်း ပြည်နယ် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) ဥက္ကဌ ဦးအောင်လင်းက ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။
“အမဲရောင်နယ်မြေဆိုတာတွေက မပြောသင့်တော့ဘူး။ မပြောရဲတော့ဘူး။ ပြောဖို့ အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ အမဲရောင်နယ်မြေ သတ်မှတ်တာမျိုးတွေလည်း ရှိလာနိုင်မယ်လို့တော့ မထင်တော့ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပြည်နယ်တွင်းတွင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရတို့က ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြီး ဆက်ဆံရေး ရုံးများ ထားရှိနေ သည်ကို တွေ့မြင်နေရသည့်အတွက် ယုံကြည့်မှုရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်လင်းက ဆိုသည်။
တပြည်နယ်လုံး တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ၇၉ အုပ်စုရှိရာ လုံခြုံရေးကန့်သတ်ချက် ကြောင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွင်း ကျေးရွာ အုပ်စု ၂၇ အုပ်စုတွင် မဲရုံမဖွင့်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ကော်မရှင် အရာရှိ ဦးကျော်ဆန်းဝင်းက ပြောသည်။
ဦးကျော်ဆန်းဝင်းက “လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတော့ အခုတော့ အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အကုန်လုံး ကျင်းပသွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) အနေဖြင့် ကယားပြည်နယ် လွတ်တော်သုံးရပ်နေရာများတွင် မြို့နယ်တိုင်း ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဟုလည်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးသိန်းထွန်းက ပြောသည်။
ဦးသိန်းထွန်းက “ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကို တတ်စွမ်းသလို ဖော်ထုတ်ပါမယ်”ဟု ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တစည ဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ် အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များနှင့် မြို့နယ် ကော်မတီဝင်များက ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားနေမှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကို ဒီးမော့ဆိုမြို့ တစညရုံး၌ ကျင်းပသွားခဲ့ကြပြီး နောက် ယခုလို ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ၌ တပြည်နယ်လုံးတွင် မဲရုံ ၂၅၅ ရုံစာရင်း ရှိသော်လည်း ၁၈၅ ရုံသာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်ကော်မရှင်ရုံးမှ မှတ်တမ်းအချက်အလက်ရ သိရှိရသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲရုံမဖွင့်နိုင်ခဲ့သည့် အမဲနယ်မြေ ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ လွိုင်ကော်မြို့နယ် တီးလုံ၊ ပါလောင်း၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်တွင် ဒေါဖု၊ ဒေါမကြီး၊ ထီးဖိုးကလို၊ ဒေါရောက်ခူ၊ ရှားတောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း ကျေးရွာများ၊ မဲစယ်မြို့နယ်တွင် ဟိုဂျစ်၊ ဘော်လခဲမြို့နယ်တွင် ဘူးခူ၊ စောလုံ အုပ်စုတို့ဖြစ်ကြသည်။
မြို့ပေါ်နှင့် အနီးအနားတွင်သာ မဲရုံရှိခဲ့သည့်မြို့နယ်များမှာ ဖားဆောင်းမြို့နယ်နှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ်ဖြစ်သည်။
ဖားဆောင်းတွင် အမဲနယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အုပ်စုများမှာ ဝမ်အောင်း၊ ကွာခီး၊ ကော်သူဒိုး၊ မိုဆာခီး၊ ဘဟန်းလော့၊ ကရယ်ခီး နှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ်တွင် ကေကော၊ သိုသီးဖို၊ သော်ခူ၊ ရော်ဒေါ်ခေါ၊ ဒိုမိုစော၊ ဟိုယာ၊ ဒိုးပရယ်၊ ဒိုးလာစော၊ ကေးလျား၊ ရာဧပရား၊ မြို့မ တို့ပင်ဖြစ်ကြသည်။
လောက်ကိုင် အခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားနေ
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကို တိုက်တွန်း
အချို့သော နိုင်ငံများတွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးပါက မဖြစ်မနေ စစ်မှုထမ်းဆောင်ရ သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်ရေးကို ကရင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီအမတ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမန်းကံညွန့်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်သည်။
ဦးမန်းကံညွန့်က ''နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့အတိုင်း ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ လိုနေပါပြီ'' ဟု ပြောသည်။
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ မန်းဝင်းမောင် လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ယင်းဥပဒေသည် အရပ်ဘက် ဆရာဝန်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းအတွက်သာ ကျင့်သုံးမှုကလွဲ၍ ကျန်ကိစ္စများအတွက် သုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲ လက်ရှိခေတ်အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်အချက်များရှိနေ သည်ဟုလည်း ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။
၎င်းက ''ပြည်ပရန်နဲ့ကြုံလာမှ ပြည်သူတွေကို စစ်ထဲထည့်ပြီး နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်မယ် ဆိုရင်တော့ အချိန်က အလွန်နောက်ကျသွားပါမယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ထားရပါမယ်'' ဟု ဆိုသည်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း (၇) ပုဒ်မ- ၃၄ဝ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အချက်တွင် အပိုဒ်ခွဲငယ် တစ်ခုအဖြစ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်း ပုဒ်မ-၃၄ဝ တွင် ''တပ်မတော်သည် အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတွင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပါဝင်ရေးအတွက် စီမံဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။ တပ်မတော်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြည်သူ့စစ် မဟာဗျူဟာကို စီမံဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိသည်'' ဟု ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော်တွင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းဖြင့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဓလေ့များနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့်အတွက် သူ့ဘာသာရေး၊ ကိုယ့်ဘာသာရေးအကြောင်း နားလည်လေးစားလာမည်ဟုလည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ဆိုသည်။
''နိုင်ငံတော်အတွက် အသက်စွန့်၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါစွန့်လွှတ်၊ လူမှုဘဝအားလုံး စွန့်လွှတ်ပြီး ကာကွယ်ရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ တာဝန်ကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ စာနာတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီ အခါမှာ ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေကို နားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်''ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်း လက်ပံတန်းမြို့နယ်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ ကျောင်းသားသပိတ်ပင်မစစ်ကြောင်း က ဆန္ဒပြအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ၉ ဦးဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်ကို သွားရောက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသားသပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုကျော်ကိုကို၊ မဖြိုးဖြိုးအောင်၊ ကိုမငိးထက်နေ၊ ကိုမင်းသွေးသစ်၊ ကိုရဲရင့်ကျော်၊ မဟန်နီဦး၊ ကိုအော်မှိုင်းဆန်း၊ နန္ဒစစ်အောင်နဲ့ ကိုအောင်နေပိုင် တို့ (၉) ဦးကို ဦးတီခွန်မြတ် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပေဒကြမ်းကော်မတီက လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး ဥပဒေပြုရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးစောလှထွန်းက “အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့။ အဲဒါတွေ သူတို့ မေးမြန်းတာပါ။ ကျနော်တို့က သူတို့ ကျေနပ်လောက်အောင် ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပညာရေးဥပဒေကြမ်းတင်ထားတဲ့ပေါ်မှာ ဥပဒေနဲ့ ညီမညီ၊ ဥပဒေနဲ့အညီရောက်ရှိလာတာဆိုလို့ရှိရင်လည်း ဥပဒေပြုရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာလေးတွေမေးတာပါဗျ၊” လို့ ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်ကနေဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းကို တွေ့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက် သူတို့ ရည်ရွယ်ချက်အထမြောက်အောင် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကို တာဝန်ပေးပြီး တွေ့ခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ကျောင်းသားတွေ အချိန်အနည်းငယ်ပဲ နှုတ်ဆက်စကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ဦးစောလှထွန်းက ပြောပါတယ်။
ဒီကနေ့တွေ့ဆုံရမှာပါဝင်တဲ့ ကိုနန္ဒစစ်အောင်ကတော့ သူတို့ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ လက်ရှိ အစိုးရနဲ့ ကျောင်းသားတွေအကြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
“လွှတ်တော်ထဲကို ဥပဒေမူကြမ်းရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ကျနော်တို့နဲ့ တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေပြီး ကျနော်တို့ကို တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်တွေက ဦးဆောင်တဲ့ တန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်လာတယ်ဗျာ။ အဲဒီတန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန်အဟုန် အားကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်။ ဆိုတော့ လွှတ်တော်က ကြန့်ကြာခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီပြဿ နာတွေ ပိုပြီးကြီးထွားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာညှိနှိုင်းအဖြေရှာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့နဲ့ လွှတ်တော်က ဒီတန်ပြန်လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ နောက်မှာ ပိတ်မိနေတယ်လို့မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ထွက်ပေါက်ဘယ်လိုရှာမလဲ၊ နောက် ကျနော်တို့ရဲ့ ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက် ၉ ချက်အပေါ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ချိုးဖောက်မှုတွေဟာ ကျနော်တို့ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲပေါ့။ အဲဒါကို လွှတ်တော်ကို ဆွေးနွေးချင်တဲ့သဘောနဲ့ လာရောက်ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။”
ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဆွေးနွေးမှုကို ဥပဒေမူကြမ်းကော်မတီက လွှတ်တော်နာယကသိအောင် ပြန်လည်တင်ပြပေးပါမယ်ဆိုပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုလည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကျင်းပနေပုံတွေနဲ့ ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်တွေ လွှတ်တော်တွေရဲ့ ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကို သိမြင်ခွင့်ရရှိစေခဲ့တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းသည် ကွန်မြူနစ် ပညာရေးဝါဒကို ခြေကုပ်ယူဟု မှတ်ချက်ပေး
လေးပွင့်ဆိုင် ရေးဆွဲခဲ့သည့် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေမူကြမ်းသည် ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးကို ထိပါးပြီး ကွန်မြူနစ်ပညာရေး ဝါဒကို ခြေကုပ်ယူသည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ဖေဖော်ဝါရီ နောက်ဆုံးအပတ်အတွင်း မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် မူလပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် ပညာရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပြင်ဆင်ထားသည့် ဥပဒေကြမ်းတို့ကို ယှဉ်တွဲကာ ပြင်ဆင်သည့် အချက်များအပေါ် ဝန်ကြီးဌာန၏ သုံးသပ်ချက်များ ရေးထားသည့် ၄၂ မျက် နှာပါ အကြံပြုစာကို ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းမှတ်ချက်များအပြင် အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် အချက် ၁ဝ ချက် ကို ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းတို့မှာ (၁) မူလ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ၏ အနှစ်သာရကို ဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ (၂) တည်ဆဲဥပဒေများကို ပယ်ဖျက်သည်။ မလိုက်နာသည့် ဥပဒေ ဖြစ်သည်။ (၃) အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကို ဤဥပဒေကို အခြေပြုပြီး ဖျက်ဆီးသည်။ (၄) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အကြိမ်ကြိမ် ကျော်လွှားချိုးဖောက်သည်။ (၅) လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို ထိပါး၍ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ပညာရေးကို ခြေကုတ်ယူသည်။ (၆) ၁၉၂ဝ ပြည့်နှစ် ကွန်မြူနစ် အခြေပြု ကျောင်းသား သမဂ္ဂများကို ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ပြန်လည်ရှင်သန်ရန် တရားဝင်ရပ်တည်နိုင်ရန် လက်ရှိကျောင်းသားများကို လွှမ်းမိုးနိုင်ရန်၊ (၇) ပညာအရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုကို အလေးမထားပါ၊ (၈) ပညာရှင်ပြုစု ပျိုးထောင်မှု၊ ထူးချွန်သူအားပေးမှု၊ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်အားလုံး ကို ပယ်ဖျက်ထားသည်။ (၉) အကယ်၍ ဤပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း အတည်ဖြစ်ပါက ပညာအရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း၊ ကျောင်းများ တက္ကသိုလ်များ စနစ်တကျမရပ်တည် နိုင်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ ရပ်တည်ရေးအတွက် မတည်မငြိမ်၊ စိတ်မအေးဖွယ်ဖြစ်ခြင်း၊ (၁ဝ) နယ်ဒေသရှိတက္ကသိုလ်များ ဆရာ မရှိ၍ ရပ်တည်ရန် ခက်ခဲ ခြင်းများကြောင့် နိုင်ငံတော် တည်ငြိမ်မှု/ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို ထိခိုက်စေသည့် အထိန်းအကွပ်မဲ့ ပညာရေးစနစ် ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်မှတစ်ဆင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီကို ပေးပို့ထားသည်။
''ဒါက အကြံပြုစာပေးပို့တာပါပဲ။ ဘာဖိအားမှမရှိဘူး လွှတ်တော်က လုပ်နိုင်တာကို လုပ်မှာ၊ စဉ်းစားတဲ့ အထဲမှာ လိုအပ်ရင်ပါချင်ပါမယ် မပါချင်မပါဘူး'' ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အမှတ် ၆ ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ရီက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်တွင် ပြောသည်။
ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက အကြံပြုစာကို ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်မှ တစ်ဆင့် ပေးပို့ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ထပ်မံလွှဲပြောင်း ပေးပို့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက် စတင်လက်ခံရရှိသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယညွှန် ကြားရေးမှူး ဦးသန်းတိုးနိုင်ကို မဇ္ဈိမက အကြံပြုစာမည်သို့ လက်ခံရရှိကြောင်း အခြေအနေကို မေးမြန်းရာ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း မရှိဘဲ အဆိုပါကိစ္စကို အမျိုးသားလွှတ်တော်ကသာ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
အကြံပြုစာပေးပို့ထားသည့် ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်ရှိသူများက အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်နေသဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားမပေးနိုင်ခဲ့ပေ။
အမျိုးသားလွှတ်တော်သို့ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံမှ အကြံပြုစာ အစောင် ၂ဝ နီးပါးကို ပေးပို့ထားပြီး နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ ကျောင်းသားများ၊ အမျိုးသားပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကွန်ရက်၊ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက မတ်လ ၅ ရက်မှ ၂ဝ ရက်ထိ ကြားနာမှုများပြုလုပ် မည်ဖြစ်သည်။
ဖားအံအကျဉ်းထောင်မှ ၈၈မျိုးဆက်ကရင်ကျောင်းသား ၄ဦး လွတ်မြောက်လာ
သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ဦးဆောင်တောင်းဆိုဆန္ဒပြ၍ ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံရပြီး ဖားအံအ ကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည့် ၈၈မျိုးဆက်ကရင်ကျောင်းသားများ အစည်းအရုံးမှ အဖွဲ့ဝင် ၄ဦးမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၅ရက်နေ့က ဖားအံမြို့တွင် သိမ်းဆည်းခံလယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ဦးဆောင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သူ ၈၈မျိုးဆက်ကရင်ကျောင်းသားများဖြစ်သည့် ဦးညီညီထွန်း၊ ဦးဝင်းဗိုလ်၊ ဦးဇော်ထိုက်နှင့် စောအယ်ကော်ခူး တို့သည် စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အောက်တိုဘာ၂၉ရက်နေ့က ထောင် ဒဏ် ၄လစီ ကျခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ဦးညီညီထွန်းက “ကျနော်တို့ကို ပုဒ်မ ၁၈နဲ့ မြို့နယ် တရားသူကြီးက ပြစ်ဒဏ် လေးလ ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလုပ်နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပါတယ်။ ပုဒ်မ ၁၈ တိုင်းကို ပြစ်ဒဏ် သုံးလသာ ချမှတ်တဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့ကို လေးလ ချတယ်။ လေးလချတဲ့ နေရာမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးအပြည့် မရဘူး။ ဆိုလိုတာက ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ်ဟာ လျော့ရက်ရှိတယ်။ ကျနော်တို့ လျော့ရက် တစ်ရက်မှ မရဘူး။ ရက်ပေါင်း ၁၂၀တိတိ နေခဲ့ရတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဖားအံအကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ၈၈မျိုးဆက်ကရင်ကျောင်းသား အစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင် ၄ဦးကို ဒေသခံလယ်သမားများက လူဦးရေ ၁၀၀ ခန့် သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
သွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့သည့် ဖားအံမြို့နယ်၊ ကော့စကလိုရွာမှ နန်းချမ်းငယ်က “ကျမတို့ကို ကူညီပေးတဲ့ သူတို့တွေကို အားကိုးအား ထားရတယ်။ စာပေမတတ်တဲ့ ရွာသားတွေက သူတို့ကို အားကိုးတယ်။ ဒီလိုမျိုးလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့ ကျမတို့အတွက် အား ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ လာကြိုဆိုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
သိမ်းဆည်းထားသည့် လယ်မြေများ ပြန်လည်ရရှိရန်အတွက် ဖားအံအခြေစိုက် ၈၈မျိုးဆက် ကရင်ကျောင်းသားအစည်းအရုံး သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ သြဂုတ် ၂၅ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့၌ လယ်သမားများဦးရေ ၁၀၀ကျော်နှင့်အတူ ဆန္ဒထုတ်ဖော် တောင်းဆိုရာမှ ဦးဆောင်သူ လေးဦးကို သက်ဆိုရာအစိုးရအာဏာပိုင်များက ပုဒ်မ ၁၈ဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တွေ ခန့်တာ ကြိုတင်နေရာဦးသလို ဖြစ်နေ
ထိုအပြင် လောက်ကိုင်မြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် နှစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင်လည်း ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တရုတ်စက် လတ်တစ်လက်၊ ကျည်များ၊ ယမ်းချောင်းနှင့် တိုက်မိုင်းများ သိမ်းဆည်းမိခဲ့သည်ဟုလည်း တပ်မတော်က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် ကိုးကန့်အဖွဲ့၏ အမာခံတစ်ဦးဖြစ်သူဟု ယူဆရသူတစ်ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြားများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ပါစင်ကျော် ကျေးရွာနှင့် ချင်းရွှေဟော်ကြားတွင်လည်း မွန်းလွဲပိုင်းက ထိတွေ့တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်ကစပြီး တပ်မတော် နှင့် ကိုးကန့်အဖွဲ့များကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဒုက္ခသည်များ လည်း အများအပြားရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်ကစပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ခွင့်ရဒေသကို သမ္မတအမိန့်ဖြင့် တပ်မတော်သို့ အာဏာလွှဲပေး ခဲ့သည်။
မုံရွာတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး ကြက်၊ ငုံး သေဆုံးမှု မြင့်မားနေ
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသော မုံရွာမွေးမြူရေးဇုန်တွင် ကြက်၊ ငုံး သေဆုံးမှုနှုန်း ဆက်လက် မြင့်မားလျက်ရှိပြီး ဇုန်ထဲရှိ ကြက်၊ ငုံးများ ဇုန်ပြင်ပ မရောက်ရှိရေးအတွက် အထူးကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
“သေဆုံးမှုက ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရင်းဇယား အရတော့ သေချာ မသိသေးဘူး။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကောင် အရေအတွက်နဲ့ ဆိုရင်တော့ သေနှုန်းက မြင့်သွားတာပေါ့။ ပြန်ပြီး ထူထောင်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိတော့ သုတ်သင် ရှင်းလင်း တာလည်း ရှိတယ်”ဟု ရွှေဘိုခရိုင် တန့်ဆည်မြို့ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာ ဇော်ဇော်ဝင်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း အကြီးဆုံး မွေးမြူရေးဇုန် ဖြစ်သည့် မုံရွာမွေးမြူရေးဇုန် အတွင်းရှိ ကြက်၊ ငုံး မွေးမြူရေးခြံများမှ ကြက်၊ ငုံးများသည် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်က စတင် သေဆုံးခဲ့သောကြောင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းများသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခဲ့ရာ H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ် တားဆီးရေး အဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့် မုံရွာမွေးမြူရေးဇုန် အတွင်းမှ ဥစားကြက်အရှင် အကောင် ၁၂၀ နှင့် ကြက် အသေ ၁၀ ကောင်၊ ငုံးအသေ အကောင် ၃၀၀၀ နှင့် ငုံးအရှင် ၁၀၀၀ တို့ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က လိုက်ထရပ်ယာဉ် တစီး၊ ဆိုင် ကယ်လေးစီးတို့ဖြင့် ဇုန်အတွင်း ခြံသုံးခြံမှ ၀ယ်ယူပြီး ဇုန်ပြင်ပသို့ သယ်ဆောင်လာစဉ် သက်ဆိုင်ရာက ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သေဆုံးကြက်နှင့် ငုံးများကို မြေမြှုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်က စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်အထိ အကျယ် ၁၀ ပေ ပတ်လည်ရှိပြီး ၉ ပေနက်သည့် ကျင်းသုံးကျင်း ပြည့်သွားပြီဟု မြေမြှုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသူများက ပြောပြသည်။
မုံရွာမွေးမြူရေး စက်မှုဇုန်တွင် လုပ်ကိုင်နေသူ ကိုဖက်တီးက “လောလောဆယ် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ ဇီဝလုံခြုံမှု အားနည်းလို့ ဖြစ်တာလို့ ယူဆတယ်”ဟု ပြောသည်။
ယခုဖြစ်ပွားနေသည့် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါသည် လူကိုကူးစက်မှု မရှိသေးကြောင်း၊ ကူးစက်လာပါကလည်း ကုသနိုင်ရန် မုံရွာမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အတွင်း အဆောင်တဆောင် သီးသန့်အခန်းထား၍ လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးနှင့် အကူပစ္စည်းများ ဆောင်ရွက် ထားကြောင်း သိရသည်။
“လူတွေကူးစက်မှု မဖြစ်အောင် စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုနေတယ်။ လက်ရှိတော့ ကြက်ငှက်တွေမှာပဲ ဖြစ်ပွားတဲ့ အနေအထားပဲ ရှိပါသေး တယ်။ ဒီရောဂါ လူမှာ ကူးစက်တယ်လို့ သံသယဖြစ်စရာ အခုချိန်ထိ ဘာမှ မတွေ့ရှိသေးပါဘူး”ဟု ဗဟို ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက် ရေးဌာန(နေပြည်တော်) မှ ဒေါက်တာ ကျော်ကံကောင်း က ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် အတွင်းက ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ စတင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၂၀၀၇၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ တို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း ရောဂါပြန့်ပွားမှု မဖြစ်ရန် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ တိရစ္ဆာန် ကုသရေး ဆရာဝန်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ ဒေါ်တင်တင်မြိုင်ကလည်း ပြောပြသည်။
မုံရွာမြို့ ကြက်၊ ငုံးမွေးမြူရေး အထူးဇုန်ကြီး၌ ယခုဖြစ်ပွားသော ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ မ၀င်ခင်အထိ ဥစားကြက်ခြံ ၁၂၃ ခြံ တွင် ဥစားကြက်ကောင်ရေ ၂ သိန်းနီးပါးနှင့် ငုံးခြံ ၅၁ ခြံတွင် ငုံးအကောင်ရေ ငါးသိန်း မွေးမြူထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရောဂါကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် အထိ ကြက် ၃၂၄၁ ကောင်၊ ငုံး ၁၃၆၁၉ ကောင် သေဆုံးသွားပြီး ပြင်ပကြက်ခြံများ ကူးစက်ခြင်း မရှိစေရန် အတွက် မွေးမြူရေးဇုန် အတွင်းသို့ အ၀င်အထွက်များ အထူးကြပ်မတ်ခြင်း၊ ရောဂါကြောင့် သေဆုံးကြက်နှင့် ငုံးများကို စနစ်တကျ မြှုပ်နှံခြင်း၊ ဇုန်အတွင်း ဇီဝလုံခြုံရေး မြှင့်တင်ခြင်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ကြက်ငှက်တုတ်ကွေး ထိန်းချုပ် ရေး အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်နေသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအား တခြားသော တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များ၌ ကြက်ငှက်များတွင် သာမက လူသို့ကူးစက်မှု မရှိစေရန် အတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမည့် အချက်များကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ကြေညာထားသည်။
ကြက်ဌက်တုပ်ကွေးရောဂါ ရန်ကုန်မြို့ထဲ ၀င်မလာဖို့ ကာကွယ်တားဆီးနေပြီ
အရက်မူးကာ နွားစာလှောင်တဲ မီးရှို့ရာက နေအိမ် ၁၁ လုံးလောင်ကျွမ်း
ပဲခူးတိုင်း ပြည်ခရိုင် ပန်းတောင်းမြို့တွင် အရက်သေစာ သောက်စားထားသူ တစ်ဦးက မီးရှို့မှုကြောင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် ညပိုင်းက နေအိမ် (၁၁) လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်း ပြည်ခရိုင် မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းညွှန့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုနေ့ည ၆ နာရီ အချိန်က ပန်းတောင်းမြို့နယ် မကျီးထုံးကျေးရွာအုပ်စု ဆင်ကူးကျေးရွာနေ ကိုဖိုးထက် ဆိုသူက အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး ၎င်း၏ နေအိမ်နှင့် တွဲလျှက်ရှိသော နွားစာလှောင်တဲ သက်ကယ်မိုးအား ဂတ်စ်မီးခြစ်ဖြင့် မီးရှို့ရာမှ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် သွပ်မိုး ပျဉ်ကာ ပျဉ်ခင်း နှစ်ထပ်အိမ် (၁)လုံး ၊ သွပ်မိုး ပျဉ်ကာ ပျဉ်ခင်း တစ်ထပ်အိမ် (၃)လုံး၊ ပျဉ်ကာပျဉ်ခင်း သက်ကယ်မိုး နေအိမ် (၂) လုံး၊ ထရံကာ သက်ကယ်မိုး ဝါးကြမ်းခင်း နေအိမ် (၅) လုံး စုစုပေါင်းနေအိမ် (၁၁) လုံး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းညွှန့်က ပြောသည်။
မီးလောင်သည့် နေရာသို့ မီးသတ်ယာဉ် (၅) စီး၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၃၉) ဦး၊ တပ်မတော်သား (၁၈) ဦး၊ ပြည်သူ (၂၀၀) ခန့်က နာရီဝက်ကြာ မီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။ မီးလောင်မှုကြောင့် လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု မရှိသော်လည်း အမျိုးသား ၁၄ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၀ ဦး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ပြည်ခရိုင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကိုဖိုးထက်အား ပန်းတောင်းမြို့ မရဲစခန်းတွင် ပြစ်မှုအမှတ် ပ-၁၉/၂၀၁၅ ၊ ဥပဒေပုဒ်မ -၄၃၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားသည်။
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ ပါဝင်မှုစွပ်စွဲချက် ရုပ်သိမ်းပေးရန် သမ္မတထံ SSPP တောင်းဆို
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသအတွင်း ဖြစ်ပွား နေသော တိုက် ပွဲတွင် သျှမ်းပြည် တပ်မတော် SSPP/SSA ပါဝင် ပတ်သက်မှု ရှိသည် ဆိုသည့် အစိုးရ၏ စွပ်စွဲ ချက်သည် မဟုတ်မှန် သောကြောင့် ရုပ်သိမ်း ပေးပါရန် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ အိတ်ဖွင့်ပေး စာတစောင် ပို့လိုက် သည်။
ဖဖေါ်ဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် သျှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA မှ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထံသို့ - ‘ကိုးကန့် ဒေသအတွင်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွင် ၎င်းတို့ ပါဝင် ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို စစ်ရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းမဖြစ်သင့် ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ တဦးပေါ် တဦး အပြန်အလှန် အလေးပေး တန်ဖိုးထား၍ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းသာတခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း” အစရှိပါဝင်သော အချက် ၅ ချက်ပါ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင် ပေးပို့ခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့ ရရှိထားတဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး မပျက်ပြားစေရေးအတွက် ကျနော်တို့ အတတ် နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ထိန်းသိမ်းနေပါတယ်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ အမြန်ဆုံး နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ကိုပဲ မျှော်လင့်တောင့်တနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဒီစွပ်စွဲချက်က မဟုတ်မှန်ပါဘူး။ လက် ရှိအနေ အထားရ အစိုးရတပ်ကို ကင်းပုန်းတိုက်ခိုက်တာတွေတောင်မှ လုံးဝမရှိစေဖို့၊ မလုပ်ဖို့ ကျနော် တို့ တားမြစ်ထားတယ်။ ဒီစွပ်စွဲချက်တွေ ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးပါလို့ သမ္မတထံ စာပေးပို့ရတာပါ ” - ဟု ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး စဝ်ခွန်ဆိုင် က ပြောသည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ နေပြည်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကိုးကန့်တိုက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်သည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA ၊ မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့အမည်ရ NDAA-ESS ၊ UWSA ဝ တပ်ဖွဲ့ နှင့် ပလောင်တပ်ဖွဲ့အမည်ရ TNLA တို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု နေပြည်တော်အစိုးရက ပြောသည်။
အစိုးရမှ ယခုကဲ့သို့ စွပ်စွဲပြောဆိုသည့် - ကိုးကန့်ပြဿနာသည် အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါး လာနေသည်ဆိုသည့်ကိစ္စ၊ ကိုးကန့်ဒေသအား တပ်မတော်ထံ အာဏာလွှဲပေးသည့်ကိစ္စရပ်များ သည် ကျောင်းသားဆန္ဒဖေါ်ထုတ်မှု၊ မြေယာပြဿနာ နှင့် လက်ပံတောင်းပြဿနာများမှ အာရုံလွှဲလိုသော ကြောင့် ဖန်တီးလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကိုယ်ရေးအမြင်ဖြင့် စဝ်ခွန်ဆိုင် က သုံးသပ်ပါသည်။
မော်တော်ကားကို ယွန်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ရွှေဆိုင်းတွေနဲ့ စီမံ
ဓာတ်ကြိုးပေါက် တက်ဖာသူ ဓာတ်လိုက်သေဆုံး
သန်လျင်မြို့နယ်တွင် ဓာတ်ကြိုးများပေါက်နေ၍ တက်ဖာသည့် အမျိုးသားတစ်ဦး ဓာတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီ ၁ဝ ရက်၊ ညနေ ၄ နာရီခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ငပကျေးရွာ၊ အမှတ် (၁ဝ) သစ်စက်ဝင်းအတွင်း နေထိုင်သည့် အသက် ၂ဝ အရွယ် ကိုဝေလင်းအောင်သည် ဝင်းအတွင်း အမြင့် ၁၅ ပေခန့်တွင် သွယ်တန်းထားသည့် ဓာတ်ကြိုးများ ပေါက်နေသဖြင့် အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးနှင့်အတူ ဓာတ်ကြိုးများကို တက်ဖာနေခဲ့သည်။ ထိုသို့ဖာနေစဉ် ပေါက်နေသည့် ဓာတ်ကြိုးကိုကိုင်မိပြီး မြေပြင်ပေါ်သို့ မှောက်လျက်ပြုတ်ကျကာ ဝဲလက်မတွင် ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာမှအပ အခြားပြင်ပ ဒဏ်ရာမရှိဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရမေတ္တာပျက်စေရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် ရေးတင်မှုဖြင့် ဓာတ်ပုံသတင်းထောက်ကို ဖမ်းဆီး
မုံရွာမြို့က နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အလွတ်တန်း ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုးကို ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ် အစိုးရမေတ္တာပျက်အောင် ရေးတင်တာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်မှာ သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ရဲမှူးမြင့်လွင်က တရားလိုလုပ်ပြီး မုံရွာရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပါတယ်။
အလွတ်တန်းသတင်းထောက် ကိုအောင်နေမျိုးကို ဖေဖော်ဝါရီ မနက်ပိုင်းက လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ မုံရွာ ၈၈ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက ဦးနေမျိုးက ပြောပါတယ်။
“လာဆွဲတုန်းကတော့ မူးယစ်မှုလို့ ပြောတယ်ဗျ။ တကယ်တမ်း အခု ကျနော်တို့ မိသားစုနဲ့ လိုက်တဲ့အခါကျတော့ မူးယစ်မှု မဟုတ်တော့ဘူး၊ နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုနဲ့ ပုဒ်မ တပ်ထားတယ်ပြောတယ်ဗျ။”
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်ရက်စွဲနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်တက်လာတဲ့ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားစာမှာတော့ ကိုအောင်နေမျိုးနဲ့ အပေါင်းပါတွေဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁း၀၀ ချိန်ကနေ ၀၂း၄၅ ချိန်ထိ Aung Nay Myo facebook စာမျက်နှာမှာ စီစဉ်သူ ဦးသိန်းစိန်၊ ၀တ္ထုသန်းရွှေ၊ ဇာတ်ညွှန်းကြိုင်ကြိုင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ စီစဉ်သည့် မိုးလုံးပြည့်ဝါဒမှိုင်းတိုက်သော ဇာတ်ကြမ်း ‘ကွန်ဒုံ ရက် ၄၀’ လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီလို ရေးသားဖော်ပြထားတာဟာ အစိုးရကို မေတ္တာပျက်အောင်၊ အစိုးရရဲ့ ၀တ္တရားဆောင်ရွက်ချက်ကို ယုတ်လျော့အောင်၊ ပျက်စီးအောင် မဟုတ်မှန်းသိလျက်နဲ့ မမှန်သတင်းလွှင့်ရန်ကြံစည်ပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာပေါ် တင်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကိုအောင်နေမျိုးနဲ့ အပေါင်းပါတွေကို ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅(က) (င) တို့အရ အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တိုင်ကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုအောင်နေမျိုးဟာ အလွတ်တန်းသတင်းထောက်တယောက်ဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ ၈၈ ငြိမ်းချမ်းပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အားတက်သရော ပူးပေါင်းကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနေသူတယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က လူ့အခွင့်အရေးရှေနေ့ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကတော့ အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅(က)(င) တို့နဲ့ အမှုဖွင့်တာ ပြင်းထန်လွန်းတယ်၊ စွပ်စွဲခံရသူ လွတ်လမ်း မရှိဘူးလို့ သုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။
“ဖြေရှင်းရတဲ့လူအတွက် မသက်သာဘူး၊ ဒီဥစ္စာက နိုင်ငံရေးပုဒ်မ၊ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေနဲ့ဆိုရင်တော့ ဖြေရှင်းရတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲ မရှိနိုင်ဘူး။ နောက်ပြီး ၅ လောကမှာတော့ ဒါကို ဒိုင်စားပုဒ်မလို့ခေါ်တယ်။ ဒိုင်စားပုဒ်မဆိုတာ တရာစွဲတဲ့သူဘက်ကပဲ အမြဲ အသားစီးရပြီး အနိုင်ရတယ်။ ကျပြီဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ၇ နှစ်ပဲ။”
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်ကစလို့ ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း လောက်ကိုင်မှာ တပ်မတော်နဲ့ ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်ကစပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တပ်မတော်ဘက်က ထောက်ခံသူတွေနဲ့ ကန့်ကွက်ရေးသားနေသူတွေ အပြန်အလှန် တင်ဆက်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ရေးတင်သူတယောက်ကို အစိုးရက အခုလို ဖမ်းဆီး အမှုဖွင့်လိုက်တာဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး လွှတ်တော်ကို စော်ကားရေးသားတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့တာတော့ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။
PRစနစ် ဥပဒေကြမ်းထွက်မှသာ ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံး ဆုံးဖြတ်နိုင်
လေးလကျော်ကြာသည်အထိ လားရှိုးမြို့မဈေးတွင်း ရွှေဆိုင်ဓားပြတိုက်ခံရမှု ကျူးလွန်သူကိုမမိသေး
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးမြို့၊ လားရှိုးမြို့မဈေးအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဝေဟင်ရွှေဆိုင်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄၊ စက်တင်ဘာအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဓားပြတိုက်ခံရမှု၏ ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးဟု လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင် မဇ္ဈိမ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲခန့်က လားရှိုးမြို့မဈေးကြီး၊ ချယ်ရီဆောင်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဝေဟင်ရွှေဆိုင်အတွင်းသို့ မျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီး၊ ဂျာကင်ဝတ်ထားသည့် လူတစ်ဦးဝင် ရောက်လာကာ ဂျာကင်အတွင်းမှ သေနတ်နှင့်ချိန်ပြီး ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ထုတ်ပေးရန် ဓားပြတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ဓားပြတိုက်ခံရသဖြင့် ဝေဟင်ရွှေဆိုင်မှ ရွှေထည်ပစ္စည်းစုစုပေါင်း တန်ဖိုးသိန်း ၁၀၀ ခန့်ပါရှိသွားခဲ့သည်။
လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းမှ ယာယီစခန်းမှူး ရဲအုပ် ဇော်ဝင်းနိုင်က "ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမမိသေးပါဘူး၊ ဖမ်းမိဖို့အတွက် ဆက်လက်ခြေရာခံ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ" ဟုပြောသည်။
အဆိုပါ ဝေဟင်ရွှေဆိုင် ဓားပြတိုက်ခံရမှုအတွက် အသက် ၄၀ ခန့်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးကို အောက်တိုဘာလလယ် ပိုင်းက ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်း မရှိသဖြင့် နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းက ပြန်လည်စေလွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ယခင် လားရှိုးမြို့မရဲစခန်း၏ စခန်းမှူးက ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မဇ္ဈိမကို ပြောကြားထားဖူးသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းက (ပ) ၃၀၂/၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၈၆ ဖြင့် ၂၀၁၄၊ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်က အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် လမ်းမကြီး နိုင်လွန်ကတ္တရားခင်းရာသို့ ကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းသည် စစ်တွေမြို့ လမ်းမကြီး တစ်လျှောက် ပလက်ဖေါင်းများနှင့် ကတ္တရာ လမ်းခင်းရာနေရာသို့ ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်နေ့က ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ လမ်းမကြီးကို သိန်းပေါင်းသောင်းချီ အကုန်အကျခံပြီး ယခင် ထောက်လှမ်းရေးဟောင်းများ ပိုင်ဆိုင်သော ဆုထူးစံ ကုမ္ပဏီမှ ကန်ထရိုက်ယူ ကွန်ကရက်လမ်းအဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ရာ လမ်းမှာ အရည်အချင်း မပြည့်မီ သဖြင့် တနှစ်မပြည့်မီ အကွက်လိုက် ပျက်စီးသွားခဲ့ရညမှ စစ်တွေတွင် ဝေဖန်မှုများ အများအပြား ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
သို့အတွက် ယခု တစ်ခါ ကွန်ကရက်လမ်းပေါ်တွင် နိုင်လွန်ကတ္တရာ ထပ်ပိုးလွှာခင်းခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ယင်းနိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းရာတွင်လည်း အရည်အသွေး မပြည့်မီသဖြင့် လူထုအကြား ဝေဖန်ပြောဆိုသံများထွက်ပေါ် လာခဲ့သဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နိုင်လွန်ကတ္တရာဆိုတာ ခင်းပြီးတာနဲ့ မသိသာသေးဘူး။ ကားတွေ အသွားများလာမှ သူ့အနေအထား ပုံကျသွားတာ။ အမှန်က နိုင်လွန်ကတ္တရာ ခင်းတယ်ဆိုရင် ကတ္တရာအဆုံးမှာ အနားကွပ် ဘလောက်ကလေးတွေ အယင်လုပ်ထားရတယ်။ Budget အခြေအနေအရ ဘလောက်ကလေးတွေ မခင်းလိုက်ရတော့ အနားစက်ကလေးတွေ ပဲ့ထွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ အရည်အသွေး မပြည့်မီလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ခင်းပြီးသွားရင် အပေါ်က အချောခင်းတာ လာအုံးမှာပါ”ဟု ၀န်ကြီးချုပ်က ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ စစ်တွေမြို့လမ်းမကြီးကို နိုင်လွန်ကတ္တရာအဖြင့် ထပ်ပိုးလွှာခင်းရာ ဆုထူးစံ ကုမ္ပဏီက တာဝန်ယူ လမ်းခင်းလျက်ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။ ယင်းပြင် လမ်းဘေး လူသွားပလက်ဖေါင်းများကိုလည်း ထပ်မံ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
“ဒီပလက်ဖေါင်းလုပ်တာ နှစ်ပတ်ခန့်ရှိနေပါပြီ။ ဆုထူးစံကုမ္ပဏီက ကျွန်တော်တို့ ပန်းရံအဖွဲ့ကို ခေါ်ယူ လုပ်ကိုင် နေတာပါ”ဟု ယင်းပလက်ဖေါင်းအလုပ်ကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသူ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ဦးကျော်ငြိမ်းက ပြောသည်။
ပလက်ဖေါင်းလုပ်ပြီးသွားလျှင် နိုင်လွန်ကတ္တရာ အနားစက်များကို ကွန်ကရစ်ဖြင့်ညှိရန် ရှိသေးသည်ဟု ယင်းအလုပ်သမား ခေါင်းဆောင်က ပြောသည်။
ယခုပလက်ဖေါင်းလုပ်နေသော အဖွဲ့သည် တောင်ငူမြို့မှ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ပထမအဖြတ်ကို စစ်တွေမြို့ နာရီစင်အသစ် အပိုင်းမှ ဘီလူးမ တံတား အစိတ်အပိုင်းထိဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသော ဘီလူးမ တံတားမှ သင်္ဘောဆိပ်ထိ အပိုင်းကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု သိရသည်။
စပါးအထွက်နည်းလို့ စိုက်ဘဏ်ပြန်ဆပ်ဖို့ လယ်သမားတွေ အခက်တွေ့
လောက်ကိုင် တိုက်ပွဲကြောင့် မူဆယ်-မန္တလေး အဝေးပြေး ကုန်ကားများ ပြေးဆွဲချိန် ပြောင်းလဲ
လောက်ကိုင် တိုက်ပွဲကြောင့် မူဆယ်-မန္တလေး အဝေးပြေး ကုန်တင်ကားများ ပြေးဆွဲချိန် ပြောင်းလဲနေရကြောင်း ဒေသ အခြေစိုက် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုန်ကား လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောဆိုသည်။
ဒေသအခြေစိုက် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များက ခရီးသွားပြည်သူများနှင့် ကုန်ကားများကို ပစ်ခတ်မှုများ၊ ခေတ္တ ခေါ်ဆောင်မှုများကြောင့် ကားသမားနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ စိုးရိမ်မှုများသည် ညပိုင်ကားပြေးဆွဲမှုကို ရှောင် လာကြသည်ဟု မူဆယ်-မန္တလေး အဝေးပြေး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းအောင်ခန့်က ပြောသည်။
''အရင်လတွေကတည်းက အဲဒီလမ်းပိုင်းမှာ ကြိုကြားပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်လေးတွေ ရှိဖူးပေမယ့် အခုလိုတော့ မစိုးရိမ်ရဘူး။ မနေ့ကပဲ ကြူကုတ်-ပန်ဆိုင်းဘက်မှာ ဖရဲသီးကားကို လက်ပစ်ဗုံးထည့်တာ၊ ချိန်ကိုက် မိုင်း တပ်ပေးတာတွေအထိ ရှိလာတော့ ကားသမားတွေက ညဘက်မမောင်းတော့ဘဲ နေ့ဘက်တွေမှာပဲ သွား ကြတော့တယ်''ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ယခင် မန္တလေး-မူဆယ်ပြေးဆွဲမှုတွင် ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင်တွင် ကားဂိတ်များမှ ထွက်ခွာပြီး တစ်ညလုံး မောင်းလေ့ရှိသော်လည်း ယခုရက်ပိုင်း ည ၁ဝ နာရီကျော်တွင် ရောက်ရာအရပ်၌ ကားရပ်နားပြီး နံနက် အချိန်မှသာ မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာသည်ဟုလည်း အဝေးပြေးဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင် အသင်းက ပြောသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်များကြောင့် အဆိုပါ မန္တလေး-မူဆယ် ကုန်ကားသွားလာမှုများ ယခင်က ထက်နည်းပါးလာပြီး အဝေးပြေးကုန်ကား လုပ်ငန်းအချို့ ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းမှုများအထိ ရှိလာနေသည်ဟုလည်း ဒေသအခြေစိုက် လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက ပြည်သူများကို ထိခိုက်စေမည့်လုပ်ရပ်များ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါက တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ပြီးသည့်အချိန် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအပေါ် ထိခိုက်မှုများရှိလာနိုင်ကြောင်း ၁ဝ၅ မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
လောက်ကိုင်အနီး တိုက်ပွဲများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် အဆိုပါနယ်မြေများသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည့် အဝေးပြေးကုန်တင်ကားများကို သတိပေးမှုများ ဆောင်ရွက်နေရကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အဝေးပြေးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှဦးက ပြောသည်။
မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံဘေးရှိ မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းဖယ်ရှားခံရ
ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံဘေးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက အာဏာပိုင်များက ဖြိုခွင်းဖယ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် သပိတ်စခန်း ဖွင့်လှစ်နေထိုင်ကြသူများကို အမှုဖွင့် အရေးယူ လိုက်ကြောင်း သိရ သည်။
ထို သပိတ်စခန်းဖွင့် နေထိုင်သူများကို စီတန်းလှည့်လည်ခြင်း ပုဒ်မ ၁၈ နှင့် စည်ပင်သာယာ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ များဖြင့် အမှုဖွင့် စွဲဆို လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် နံနက် ၃ နာရီခန့်က လုံထိန်းများနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ထမ်းများ၊ စည်ပင် သာယာ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ က ၀င်ရောက် ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး သပိတ်စခန်း အတွင်းရှိ အမျိုးသား ၇ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၇ ဦးတို့ကို အထက်ပါ အမှုများဖြင့် တရားစွဲ၍ လာ မည့် မတ်လ ၁၁ ရက်၌ ရုံးချိန်းလိုက်သည်ဟု ဆိုသည်။
“သူတို့တွေကို ရုံးချိန်း ချိန်းပြီးတော့ ခံဝန်ကတိနဲ့ ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ အမှုကိုတော့ ဆက်ရင်ဆိုင်ကြရဦးမှာပေါ့။ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင် ထားတာမျိုးတော့ မလုပ်တော့ဘူး။ ပုဒ်မ ၁၈ ရော၊ စည်ပင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၈ ရော အားလုံးကို ခံဝန်နဲ့ပဲ ပြီးသွားတယ်”ဟု မိကျောင်း ကန်သပိတ် သမားများဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးရောဘတ်စန်းအောင်က ပြောသည်။
သပိတ်စခန်းကို ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းစဉ်က သပိတ်စခန်း အတွင်းရှိ အိပ်နေသူ ၁၈ ဦးကို ခေါ်ဆောင်သွားသော်လည်း သပိတ် စခန်း နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လမ်းဘေးဈေးသည် ၄ ဦး ပါဝင်နေသည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျမတို့ကို မနက်အစောကြီးရှောင်တခင် လာဖမ်းသွားတာ။ ဖမ်းတော့လည်း ကျမတို့ကို ဆံပင်တွေဆွဲ၊ တုတ်တွေနဲ့ရိုက်ပြီး ဖမ်းခေါ်သွားတာ။ ကျမတို့မှာတချို့ဆို လက်တွေပွန်း၊ နဖူးတွေ ပေါက်ကုန်တယ်။ ကျမတို့ကို ရန်ကင်းက ရုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ အပြင် ဘက် က ဘယ်သူနဲ့မှလည်း တွေ့ခွင့်မပေးဘူး”ဟု မိကျောင်းကန် သပိတ်ကိစ္စနှင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံနေရသည့် ဒေါ်စိန်ခင်က ပြော သည်။
ယခုနောက်ဆုံး ဖြိုခွင်းလိုက်သော မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံလမ်း အတွင်းမှ သပိတ်စခန်းသည် လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်တွင် ရက်အရှည်ကြာဆုံး သပိတ်စခန်း ဖြစ်ပြီး သပိတ်မှောက်ခဲ့သည့် ရက်ပေါင်း ၃၄၀ ရောက်ပြီးမှ ဖြိုခွင်းခံလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အလားတူ ရန်ကုန်မြို့တော် ခန်းမရှေ့တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မိကျောင်းကန် မြေသိမ်းခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ သူ ဒေါ်ခင်မာကြူ အပါအ၀င် ၁၄ ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရက တရားစွဲဆို၍ ကျောက်တံတားမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးတင် စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် တရားမ၀င် စီတန်း လှည့်လည်မှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁ လ၊ စည်ပင်သာယာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၃ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ လနှင့် စည်ပင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄၁ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁ လ စုစုပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၆ လ ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက်က ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့သေးသည်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၁၉၉၁ ခုနှစ်က သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မိကျောင်းကန် (၁) ရပ်ကွက်၊ (၂) ရပ်ကွက်နှင့် (၃)ရပ်ကွက်ရှိ မြေနေရာများကို တပ်ပိုင်မြေအဖြစ် သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါ မြေနေရာများသည် ဂရန်ပေါက်မြေများ မဟုတ်သည့်အတွက် ယင်းနေရာတွင် နေထိုင်ခဲ့သူများအားလုံးကို တပတ်အတွင်း အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ငွေကြေး တတ်နိုင်သူများကို မြေကွက် တကွက်လျှင် ၄၈၀၀ ကျပ်(၁၉၉၃ ခုနှစ် ငွေကြေးပေါက်ဈေး) ဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်များတွင် ပြန် လည် ရောင်းချပေးခဲ့ ကြောင်း၊ ငွေကြေး မတတ်နိုင်သူများကို ပဲခူးရိုးမ အစပ်ရှိ မြေနေရာများနှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေနေရာများ တွင် နေရာချပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တလခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သော အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ သပိတ်မှောက်ပွဲသည် တနိုင်ငံလုံးချီလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်သော်လည်း တစုံတရာပြဿနာ မပေါ်ဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ လှုပ်ရှားနေခဲ့သည့်တိုင် အစိုးရက တားမြစ်ရန် ကြိုးစားရာတွင် “နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး” ဆိုသော အမြင်ဖြင့်ကြည့်နေသည်မှာ လုံးဝ ဆီလျော်မှု မရှိပေ။
လောက်ကိုင်တွင် ကိုးကန့်တပ်များနှင့် ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများသည် “နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး” (National Security) ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် အကြုံးဝင်သော်လည်း သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများ၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ် (Democratizing) တရပ်သာဖြစ်ပြီး လက်သင့်ခံရမည့် အရာဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ၏ လိုလားမှုကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုဖြင့် အဖြေရှာရမည့် ကိစ္စသာဖြစ်သည်။
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ပြဌာန်းရန် ကြိုးပမ်းစဉ်ကတည်း အစဉ်တစိုက် ကန့်ကွက်မှု၊ အကြံပေးတိုက်တွန်းမှုများကို နားမထောင်ခဲ့သော အစိုးရသည် ကျောင်းသားများက သပိတ်စစ်ကြောင်း စဖွင့်လိုက်ချိန်မှစ၍ ဆူပူမှု၊ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း၊ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စသော မဆီမဆိုင်သည့် စကားများသုံးစွဲကာ ကျောင်းသားသပိတ်ကို ပုံဖော်နေခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကို လမ်းကြောင်းရမည့်အစား ရန်သူသဖွယ်ပစ်မှတ်ထားနေခဲ့ရာ ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်း ရန်ကုန်သို့ နီးကပ်လာချိန်တွင် ပိုမိုသိသာ ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများ လိုလားချက် ၁၁ ချက်ကို ဖုတ်ပူမီးတိုက် သဘောတူလိုက်ပြီး ကျောင်းသားသပိတ် ရန်ကုန်သို့ မဝင်ရေးကို အစိုးရက အပြင်းအထန် ပြောဆိုနေခဲ့သည်။
ထို့ထက်ပို၍ ဆိုးရွားသည်မှာ ရန်ကုန်တွင် တန်ပြန်သပိတ်များ ဖန်တီးခြင်း၊ ၄ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးတွင် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ပညာရေး ဒု ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန့်ရှင်းက ကျောင်းသားသပိတ် ရန်ကုန်သို့ ဝင်လာလျှင် သဘောတူညီချက် ၁၁ ချက် ပျက်ပြယ်မည်ဟု ရာဇသံပေးခြင်း၊ ကျောင်းသားသပိတ် ရန်ကုန်သို့ ဝင်လာရန် ကြိုးပမ်းလာလျှင် အမှန်တကယ် အင်အားသုံးတားဆီးမည့် လက္ခဏာရှိခြင်းတို့က သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြမှုအပေါ် လွဲမှားစွာ ရှုမြင်နေခြင်းကို ဖော်ပြနေသည်။
လူထုလှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ကိစ္စများနှင့် တတန်းတည်းထားပြီး ရှုမြင်နေခြင်းမှာ ယခင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် ဖိနှိပ်မှုလမ်းစဉ်ကို ပြန်လည် ထင်ဟပ်သကဲ့သို့ ရှိနေသည်။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေဖြင့် နေရာတိုင်းတွင် လုံခြုံရေးအမြင်ဖြင့် ရှေ့တန်းတင်ပြီး လွဲမှားစွာ ကိုင်တွယ်နေခြင်းအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေး လေးဖင့်နေမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး အလှမ်းဝေးနေဦးမည်ဖြစ်တော့သည်။
ကြွက်ကိုက်ဖြတ် ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် မတ်ပဲ အထွက်နှုန်းကျဆင်း
ကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်းများ ရန်ကုန်သို့ မဝင်နိုင်ရန် လွှတ်တော်က လုပ်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေဟု ဆို
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင် ချက်ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ကြားနာရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းများ ရန်ကုန်သို့ မဝင်စေရန် လွှတ်တော်က အကောင်အထည်ဖော်နေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒီမိုကရေစီ ဦးဆောင်လှုပ် ရှားသူများအဖွဲ့ ဦးဆောင် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ကိုနန္ဒာစစ်အောင်က ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်က ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ Home ခန်းမတွင်ပြုလုပ်သည့် လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲမှ သဘောထူထားသော အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်း ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုနန္ဒစစ်အောင်က ''အစိုးရက ရန်ကုန်မဝင်ရေး ဦးတည်တောင်းဆိုနေသလိုပဲ လွှတ်တော်ကလည်း မဝင်လာအောင် တမင်တကာ လုပ်နေသလား အကောင်အထည် ဖော်နေသလားလို့ သုံးသပ်နိုင်တယ်'' ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီက မတ်လ ၅ ရက်မှ ၁၅ ရက် အထိ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များကို ကြားနာမည်ဖြစ်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် ဒီမိုကရေစီ ပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်(NNER) တို့၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်တွင် အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေကို ပြင် ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ကြားနာမည့် အစီအစဉ်သည် လွှတ်တော်သမိုင်းတွင် ထူးခြားသည့် (ပုံမှန် မဟုတ်သော) အစီအစဉ်အဖြစ် တွေ့မြင်ရသည့်အပြင် အချိန်ဆွဲသည့် အနေအထားမျိုးဖြစ်သည်ဟု အများကယူဆနိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် များစွာစိုးရိမ် မကင်းဖြစ်မိသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် စာရေးဆရာချစ်ဦးညိုကလည်း '' စာရေး ဆရာတစ်ယောက် ပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောရရင်ကြားနာမှုကို မတ်လ ၅ ရက်ကနေ ၁၅ ၇က်အထိ ဘယ်အဖွဲ့ဘယ် အဖွဲ့ဆို ခွဲထားတာရှိတယ်။ အဲ့တာက လွှတ်တော် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရပဲ လုပ်နေတာလား။ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ ဆိုတာသေချာ မသိဘူး''ဟု ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ကြားနာချိန်က ၁ဝ ရက်နှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးချိန်၊ အမိန့်ထုတ်ပြန်ချိန်၊ ဥပဒေအတည်ပြုချိန်များ ကို စဉ်းစားမိပါက အချိန်ဆွဲသည်ဟု ခံစားရကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က ထုတ်ပြန်သည့် မေတ္တာရပ်ခံချက်တွင် အမျိုးသား လွှတ်တော်၏ ကြားနာမည့် အစီ အစဉ်များသည် အစိုးရရပ်တည်ချက်ဖြစ်သည့် ကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်းများ ရန်ကုန်သို့ ဝင်မလာစေရန် အကောင်အထည်ဖော်ပေးသကဲ့ သို့ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုထားသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်က ၁ဝ ရက်တာ ကြားနာမည့် အစီအစဉ်ကို ဒီမိုကရေစီပညာ ရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ကျောင်းသားများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ဝမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဒီမိုကရေစီပညာရေး လှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက် (NNER) ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ် ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၈၈ နောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုများ တိုင်ကြားနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုများနှင့် ပတ်သက် ပြီး လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေး ကော်မတီသို့ လာရောက် တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရသူများသည် ကိုယ်တိုင်လာရောက် တိုင်ကြားခြင်း ပြုရမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“စုံစမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေရတဲ့ အပိုင်းတွေလည်း ရှိတော့ လာမယ့် မတ်လဆန်းမှာ စပြီးတော့ စုံစမ်းမှုတွေ လုပ်တော့မယ်။ စုံ စမ်းမှုတွေ လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း အဲဒီတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေကို မှတ်တမ်းမှတ်ရာအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားဖို့ ဖြစ်တယ်။ လုပ်ခဲ့တဲ့သူကို တရားစွဲဖို့နဲ့ အပြစ်တင်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ထိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမှုများ မှတ်တမ်းပြုစုနိုင်ရေး အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်း စသည်များကို နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်းများက ကူညီထောက်ပံ့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း များ၌ တိကျမှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ကော်မတီက အလေးထား ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်က“လာပြီး တိုင်ကြားတဲ့သူတော့ မရှိသေးဘူး။ သွားလာရ လွယ်ကူတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းတို့လို နေရာတွေက ကိစ္စတွေကို ဦးစားပေးမယ်။ ဝေးလံတဲ့ နေရာတွေက ချိုးဖောက်ခံရတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ ကော်မတီဝင်အင်အား များပြားလာတဲ့ အခါမှ ဆက်လုပ်သွားမယ်။ အဲဒီလို ဝေးလံတဲ့ ဒေသတွေကလည်း ကျနော်တို့နဲ့ လာပြီး ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေတော့ ရှိတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရသူများ၊ ဖြစ်ရပ်များကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်၊ မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းထားရန်နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် အထိမ်းအမှတ် ပြတိုက်အဖြစ် ထားရှိနိုင်ရန်အတွက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေး ကော်မတီကို ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တခြား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ကိစ္စတွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများအပြား ရှိနေတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ၈၈ နောက်ပိုင်း ကိစ္စတွေ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ မရှိသေးတော့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်”ဟု ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်က ဆို သည်။
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရာတွင် နာမည်ကျော်၊ နာမည်ရ သူရဲကောင်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ သာမက လူ အများ မေ့လျော့နေကြသော လူ့အခွင့်အရေး ချိူးဖောက်ခံရသူများကိုပါ ရှာဖွေဖော်ထုတ် မှတ်တမ်းတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ မှတ်တမ်းတင်မှသာ ယင်းကာလများက အာဏာရှင်များ၏ ရက်စက်မှုကို နောင်လာနောက်သားများ သိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ ကော်မတီက ပြောသည်။
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရေး ကော်မတီကို ညီညွတ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့(UNDO)၊ လူ့အခွင့် အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်မှုများ ကွန်ရက်၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ ကွန်ရက်၊ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး သံဃာ တော်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အပါအဝင် လွတ်လပ်ပြီး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ပေါင်း ၂၀ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရ ကလည်း နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများ တိုးမြှင့်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေး ကိစ္စတို့ကို ဆောင်ရွက်ရန် အတွက်ဟုဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ယင်း ကော်မရှင်သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှု တချို့ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်၍ အစီရင်ခံစာရေးသားခြင်း နှင့် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့် တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲကို ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ NCCT ပြော
ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်ကို စည်းကမ်းမဲ့ လမ်းကြောင်းအဖြစ် နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ် ရှုမြင်
မြန်မာ့ ပညာရေးစနစ် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဖော်ဆောင်လွန်းပါက စည်းကမ်းမဲ့လွန်းသည့် လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်စေသည်ဟု နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ်၏ တက္ကသိုလ် ပညာသင်ကြားရေးအဖွဲ့မှ သံဃာတော်များက အကြံပြုလိုက်သည်။
“အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း” ၏ အခန်း (၃)၊ ပုဒ်မ (၄)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) ပါ “ပညာရေး လွတ်လပ်ခွင့်တွင် ကျောင်းသားများ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဆရာများ လွတ်လပ်ခွင့်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဘာသာစကား လွတ်လပ်ခွင့်၊အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်ခွင့်၊ ဒေသဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ ကျောင်းများ လွတ်လပ်ခွင့် စသည်တို့ ပါဝင်ရေး” ဟူသည့်အချက်ကို ရည်ညွှန်းကာ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိတက္ကသိုလ်က သုံးသပ်လိုက်ခြင်းဖြ စ်သည်။
အထက်ပါပုဒ်မခွဲကို နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ တက္ကသိုလ်က “ကျောင်းများ၊ ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများ၊ သင်ရိုးညွှန်း တမ်းများ၊ ဘာသာစကားများ၊ အတွေးအခေါ်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာအားလုံးတွင် လွတ်လပ်မှုများဖောင်ဆောင်လွ န်းလျှင် စည်းကမ်းမဲ့လွန်းသည့် လမ်းကြောင်းကို ဦးတည်နေခြင်းကြောင့် ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း” ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်ထုတ် အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သုံးသပ်အကြံပြုလေ့ မရှိသည့် နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိတက္ကသိုလ် အနေဖြင့် အဆိုပါ ပညာရေးကိစ္စကို ရုတ်ချည်း ထောက်ပြလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ ကလည်း အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က အလားတူပင် အကြံပြုခဲ့သေးသည်။
ထိုသို့ ပညာရေးကိစ္စတွင် သံဃာတော်များ ဝင်ရောက်အကြံပြုမှုအပေါ် ဆရာတော် အရှင်မိုးသု (မန္တလေး) က “ဝေဖန် ကန့်ကွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ခြေခြေမြစ်မြစ်ဖတ်ပြီးတော့ လေးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့ကိုခေါ်ပြီး ဆရာတော်တို့ သဘောထားကတော့ ဒီလိုရှိတယ် ပြောသင့်တာပေါ့။ အခုက အမြင်မကောင်းဘူး ဖြစ်တာပေါ့။ စေတနာမှန်နဲ့လုပ်တယ် ဆိုရင်တောင် ဆရာတော်ကြီးတွေ အစိုးရနဲ့ ပေါင်းလုပ်တယ်၊ အစိုးရ ဘုန်းကြီးတွေဆိုတာက ပိုပြီးခိုင်မာသွားစေတာပေါ့” ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်က မဇ္ဈိမကို မိန့်သည်။
နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ တက္ကသိုလ်၏ အကြံပြုချက်တွင်မူ ဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် “နှစ်သက်ရာ ပါတီသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်” ဟူသည့် ပြင်ဆင်လိုက်သည့် ဥပဒေမူကြမ်းပါ အခန်း (၄) ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (ဃဃ) ကို ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်းလည်း သုံးသပ်ထားသေးသည်။
ဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသို့ဝင်ရောက်ပါက “ပါတီစွဲ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သင်ကြားအုပ်ချုပ်မှုများတွင် ဆိုးကျိုးများ များစွာ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် ပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း” ဟု အကြံပြုချက်တွင် ပါရှိသည်။
ယင်းအကြံပြုချက်အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အဖွဲ့ချုပ်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ အာကာမိုးသူက “ဝန်ထမ်းတွေ အကုန်လုံးက ကျွန်မဟုတ်ဘူး။ သူယုံကြည်ရာတော့ ယုံပစေ့လေ။ သူ့ယုံကြည်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ Human Right ကို တော်တော်လေး ချိုးဖောက်ရာကျတဲ့ အမြင်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်တယ်” ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ ရက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုထားသည်။
ထို့ပြင် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ သင်ကြားမှုအပေါ် ကျောင်းသားများက အကဲဖြတ်မည့် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း ပါ ပုဒ်မ(၅)၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(စစ)ကိုလည်း “မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မကိုက်ညီခြင်းကြောင့် ပယ်ဖျက်သင့် ကြောင်း” နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ တက္ကသိုလ်မှ သင်ကြား/စီမံ ဆရာတော်များ၏ အကြံပြုချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
အလားတူပင် “အခြား ဘာသားရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ပညာရေး ကျောင်းများ” ဟူသည့် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း ပုဒ်မ ၃၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ည) မှာလည်း တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် ရတက်မအေးစရာ၊ ကျောချမ်းစရာများဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လုံးဝပယ်ဖျက်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်ထားသေးသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက် (NNER) ကမူ ယင်းပုဒ်မခွဲသည် “ဘာသာရေးကို သီးသန့်သင်ကြားသည့် ကျောင်းများကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်” ဟု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ရက်တွင် ရှင်းလင်းချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်း” ပေါ်ပေါက်လာပုံ
လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သည့် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်များနေခြင်း၊ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့် မရှိခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ပြင်ဆင်ပေးရန် ကျောင်းသားများက ကနဦးတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးနောက် ရက်ပေါင်းခြောက်ဆယ်အတွင်း လေးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သို့သော် ကျောင်းသားတို့ တောင်းဆိုသည့် လေးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲကို အစိုးရက လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး သပိတ်စစ်ကြောင်းများ အရှိန်မြှင့်လာမှသာ ဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲများ၏ ရလာဒ်အဖြစ် ကျောင်းသားတို့ တောင်းဆိုသည့် လက်ရှိကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် စာမေးပွဲစနစ်နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စနစ်များကို ပြင်ဆင်ရန်၊ ဒေသအလိုက်၊ ကျောင်းအလိုက် လွတ်လပ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရန်၊ တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ၏ ဘာသာစကားလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ဘာသာစကားအခြေပြု ဘာသာစကားသုံး ပညာရေးစနစ်ကို ထည့်သွင်းရန်၊ ကျောင်းသားများ လွတ်လပ်စွာတွေး ခေါ်စဉ်းစားနိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာစူးစမ်း သင်ယူနိုင်မည့် နစ်စနစ်များ ပြောင်းလဲရန်တို့ ပါဝင်သည့် စုစုပေါင်း (၁၁) ချက်ကို အစိုးရဘက်က မူအားဖြင့် သဘောတူခဲ့သည်။
ထို့နောက် အထက်ပါအချက်များကို အခြေခံရေးဆွဲထားသည့် NNER ၏ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင် လွှတ်တော်တင်ရန် လေးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲတွင် သဘောတူလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ မကွေးကျောင်းတိုက် ဆရာတော်ဖြစ်သည့် ဦးပါမောက္ခကမူ “မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ် တိုးတက်ဖို့ အတွက် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ လုပ်ကြစေချင်တယ်။ သဘောထားတွေ မတင်းမာဘဲနဲ့ပေါ့” ဟု ၎င်း၏ အမြင်ကို မိန့်သည်။
အသက် ၅ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်သည် အသက်ကို ခပ်မြန်မြန်ရှူလိုက်သည်။ သူ၏ လက်ဖဝါး အိအိကလေးသည် အေးစက်လျက် ရှိနေ၏။ ရင်ခုန်သံ မြန်လွန်းသဖြင့် သူ၏ရင်ဘတ်သည် နိမ့်ချည်မြင့်ချည် ဖြစ်နေသည်။ ဆွဲကိုင်ခေါ်ယူ လိုက်သည့် သူ့မွေးစားမိခင်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ အလိုက်သင့် ပါလာသော်လည်း သူ့ မျက်လုံးများသည် ရှက်စနိုးဟန် ဖြစ် နေသည်။ သူ့ဘဝ အတွက် မိခင်တယောက်၏ ရင်ခွင်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ထိုင်လိုက်ရသည့် ခံစားချက်က မျက်နှာ တွင် ပေါ်လွင်နေ၏။
သူသည် လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကလေးသူငယ် ပြုစုရေး ဂေဟာမှ ခွဲခွာကာ ယခုမှ မြင်ဖူးသော မွေးစားမိဘများနှင့်အတူ တကြိမ်တခါမျှ မရောက်ဖူးသည့် အိမ်ဆီသို့ သွားရတော့မည်။ လူမှုဝန်ထမ်း အမှတ်အသား ဖြစ်သည့် အင်္ကျီအဖြူနှင့် လုံချည်အပြာနုရောင် ယူနီဖောင်းကို တွဲဖက် ဝတ်ဆင်ထားသည့် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး၏ ရှေ့တွင် ပုဆစ်တုပ်ထိုင်ကာ ဦး ၃ ကြိမ်ချ၍ ကန်တော့လိုက်၏။
“သား မေမေတို့ အိမ်ကို ရောက်ရင် မဆိုးရဘူးနော်။ လိမ်လိမ်မာမာနေ နော်။ စာလည်း ကြိုးစားရမယ်နော်” ဆိုသည့် ဆရာမကြီး၏ ဆုံးမစကားကို ခေါင်းတွင်တွင် ညိတ်သည်။ ထို့နောက် သူ့ပိုင်ဆိုင်မှု တခုဖြစ်သည့် ကျောပိုးအိတ် အဟောင်းလေးကို ကိုင်လျက် သူ့မွေးစားမိခင်ဘက်သို့ လှည့်လိုက်သည်။
“သား အင်္ကျီလဲမယ် လာ။ ဒီအိတ်ကို ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ထားခဲ့နော်။ သားအတွက် အိမ်မှာ ကျောပိုးအိတ် အသစ်လေး ရှိတယ်” ဟု မွေးစားမိခင်ဖြစ်သူက အလွန်ပျော်ရွှင် ကြည်နူးနေသော လေသံဖြင့် ဆိုသည်။
အဝတ်အစား အသစ်များကို ဝတ်ဆင်လျက် မွေးစားမိခင်၏ လက်ကိုဆွဲကာ ဖြိုးဖြိုး (အမည်လွှဲထား) သည် သူနေထိုင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသည့် ကျောင်းကို ကျောခိုင်းထွက်လိုက်သည်။ သူ့နောက်တွင် အဖော်ဖြစ်ခဲ့သည့် ကလေးများ၏ နှုတ်ဆက် သံနှင့် ကျောင်းကို ပြန်လာလည်ရန် ဖိတ်ခေါ်သံများ တစာစာနှင့် မညီမညာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ နှုတ်ဆက်နေသော ကလေးများတွင် အားကျစိတ်၊ ဝမ်းနည်း သိမ်ငယ်စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေဟန် တူသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု စံနှုန်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်း တို့၏ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် မိဘများ ကိုယ်တိုင် စွန့်ပစ်ကြသဖြင့် ထိုကလေးငယ်များသည် မိဘမဲ့များ ဖြစ်ကြရကာ ဂေဟာများ၊ သင်တန်းကျောင်း များသို့ ရောက်ရှိလာကြသည်။ ထို့အပြင် ပြည်တွင်းစစ်၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ ကလည်း မိဘမဲ့ကလေး အရေအတွက်ကို တိုးပွားစေသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ ကလေးပြုစုရေး ဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်အေးအေးမြင့်က “ရပ်ကွက် ကျေးရွာတွေက မိဘမဲ့ ကလေးတွေ ရောက်လာတာ ရှိသလို၊ မိဘအကျဉ်းကျနေလို့ ယာယီ စောင့်ရှောက်ထားဖို့ ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆေးရုံတက်ပြီး စွန့်ပစ်ထားခဲ့လို့ ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေ များတယ်” ဟု ပြောသည်။
မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များကို စောင့်ရှောက်ပေးသည့် ဌာနတခု ဖြစ်သည့် ရွှေဂုံတိုင် ကလေးပြုစုရေး ဌာနတွင် ၆ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျောင်းအုပ်ကြီးဟောင်း ဒေါ်ခင်မာအေးက “ကလေးတွေက စွန့်ပစ်ခံရလို့ ရောက်လာတာ များတယ်။ မိဘ ကွယ်လွန်သွားလို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မယ့်သူ မရှိလို့ ရောက်လာတာ နည်းတယ်။ တချို့ကလေးတွေက မိဘရှိပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပြဿနာကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် ကလေးတွေကို စွန့်ပစ်ထားခဲ့ကြတာ” ဟု ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိတွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဖျာပုံခရိုင် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးမှူး တဦးလည်း ဖြစ်သည့် သူက ဆက်လက်၍ “ဆရာမ တာဝန်ယူ ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်အတွင်းမှာ ကလေးတွေနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ မိဘတွေက စောင့်ရှောက်နိုင်အောင် တနှစ်ကို အယောက် ၂၀ လောက်ထိ ကူညီပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ တော်တော်များများ အဆင်ပြေကြတယ်။ ကျောင်းကောင်းကောင်း ထားပေးတယ် ဆိုတာ ပြန်သိရတော့ ဝမ်းသာရတယ်။ အဆင်မပြေလို့ ပြန်လာအပ်တာ ရှားပါတယ်” ဟု ရှင်းပြသည်။
သူတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ် ကာလအတွင်း မိဘမဲ့ကလေးများ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ မိဘများ၏ စွန့်ပစ်မှုကြောင့် ကလေးပြုစုရေး ဂေဟာသို့ ရောက်ရှိလာသူများ ဖြစ်ကာ၊ အများစုမှာ ကလေးဆေးရုံများတွင် စွန့်ပစ်ထားခဲ့သည့် ကလေးများ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖြိုးဖြိုး ဆိုသော ထိုကလေးသည်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မိဘမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ကလေးငယ်များ အနက် တဦးပင် ဖြစ်ပြီး လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကလေးသူငယ် ပြုစုရေး သင်တန်းကျောင်းများတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသူ တဦးလည်း ဖြစ်သည်။
“ဖြိုးဖြိုးက ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ဆရာမတွေကို ပြောလေ့ရှိတယ်။ သူ့အမေနဲ့ အဖေ သူ့ကို ပြန်လာခေါ်မှာ ဆိုပြီး တော့” ဟု ထိုကလေးငယ်ကို အနီးကပ် ပြုစုပေးခဲ့သည့် ဆရာမတဦးက ကရုဏာသက်သော မျက်နှာအမူအရာ ဖြင့် ပြောပြသည်။
မွေးကင်းစ အရွယ်အတည်းက ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည့် ဖြိုးဖြိုးတယောက် မိဘအသစ်၏ ရင်ခွင်သို့ ခိုလှုံခွင့် ရသွားသဖြင့် ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်နေကြောင်း မျက်ရည်ဝဲနေသည့် ထိုဆရာမ၏ မျက်လုံးများက ဖော်ပြနေ၏။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ သည်။ ယင်းစာချုပ်ပါ အပိုဒ် ၂၀ တွင် မိဘများနှင့် တသီးတခြား ဖြစ်နေသော ကလေးငယ်များ အတွက် နောက်ထပ် ဖြေရှင်းစရာ နည်းလမ်း လုံးဝမရှိတော့သည့် အခါတွင်မှသာ သင်တန်းကျောင်းများသို့ ပို့ဆောင်အပ်နှံခြင်း ပြုရမည် ဆိုသည့် အချက်ကို ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
မိသားစု မရှိတော့သော ကလေးများအား တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်မည့် မိသားစုထံ ယာယီအပ်နှံပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) မွေးစားစေခြင်း တို့ကဲ့သို့ ဦးစားပေး နည်းလမ်းများ မရှိတော့မှသာလျှင် ကလေးပြုစုရေး ဂေဟာများ၊ သင်တန်းကျောင်း များသို့ ပို့ရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်မည့် မိသားစုထံ ယာယီအပ်နှံပေးခြင်း ဆိုသည်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကလေးများ ရှိပြီး ထိုမိဘမဲ့ ကလေးကို တာဝန်ယူ ထိန်းကျောင်း ပြုပြင်ပေးရန် သဘောတူသော မိသားစုတစုကို ဆိုလိုသည်။ မွေးစားခြင်း ဆိုသည်မှာ ထိုကလေးငယ်သည် မိသားစုသစ်တခုတွင် ထာဝရ မိသားစုဝင် အဖြစ် နေထိုင်သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကလေးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်က အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။
ဂေဟာနှင့် သင်တန်းကျောင်းများသည် မိဘမဲ့ကလေးများ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ပုံစံတွင် နောက်ဆုံးအဆင့် အဖြစ် ကျင့်သုံးသင့်သော စနစ်သာ ဖြစ်သည်။ မိဘမဲ့ ဖြစ်သွားသည့် ကလေးငယ်အား ဂေဟာစနစ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှုများ မပြုလုပ်မီ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းက သော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းမွေးဖွားရာ ပတ်ဝန်းကျင်၌ သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၌ သော်လည်းကောင်း (တခြားသော သူများကို မွေးစားစေခြင်း) ထားပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မပြုနိုင်မှသာလျှင် မိဘမဲ့ ကလေးထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာများ၌ ထားရှိရမည် ဖြစ်သည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံး ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်သည့် ဂေဟာ၊ သင်တန်းကျောင်းများတွင် ထိန်းသိမ်းသည့် စနစ်ကို အဓိက ကျင့်သုံးပြီး၊ သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် မိသားစုများက တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် မွေးစားစေသည့် နည်းကိုသာ ကျင့်သုံးနိုင်ဆဲ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး အခြေအနေ၊ အသိပညာ နည်းပါးမှု၊ လူမှုရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်းကြောင့် စွန့်ပစ်ကလေး ဦးရေ များပြားလာပြီး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော ကလေးဦးရေလည်း တိုးလာကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနက ဆိုထားသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ (UNICEF) ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိဘ တဦးမဲ့ သည့် ကလေးငယ်ပေါင်း ၁၅၃ သန်းရှိပြီး၊ မိဘ ၂ ဦးလုံး မရှိတော့သည့် ကလေးငယ်ပေါင်း ၁၈ သန်းခန့် ရှိကာ ထိုကလေးများသည် မိဘမဲ့ ဂေဟာများ၌ ဖြစ်စေ၊ လမ်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
UNICEF ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀ဝ၆ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်း မိဘမဲ့ ကလေးဂေဟာ ပေါင်း ၄၀ ကျော် ဖွင့်ခဲ့ပြီး ကလေးပေါင်း ၁၉၁၂ ယောက်သည် မိသားစုအသိုင်းအဝိုင်း၏ အပြင်တွင် နေထိုင်ကြရကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အုပ်ထိန်းသူမဲ့ ကလေးသူငယ်များအား အစိုးရက စောင့်ရှောက်ပေးလျက် ရှိသည့် ကလေးပြုစုရေး ဌာနပေါင်း ၅ ခုရှိသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေး၊ မော်လမြိုင်နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့ တို့တွင် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနက ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကလေးပြုစုရေး ဌာနများတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူမှုရေးချို့တဲ့နေသည့် ကလေးများနှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်မည့်သူ မရှိသော ကလေးများအား မွေးစမှ အသက် ၈ နှစ်အရွယ်အထိ စောင့်ရှောက်ပေးလျက်သည်။
အစိုးရသည် မွေးကင်းစ အရွယ်မှ အသက် ၈ နှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ကလေးငယ်များကို ရွှေဂုံတိုင် ကလေးပြုစုရေး ဂေဟာတွင် လည်းကောင်း၊ အသက် ၈ နှစ်နှင့်အထက် ယောက်ျားကလေးများကို လူငယ်သင်တန်းကျောင်း (ကျိုက်ဝိုင်း) ၌ လည်းကောင်း၊ မိန်းကလေးများကို အမျိုးသမီးကလေးများ သင်တန်းကျောင်း (မလိခ) ၌ လည်းကောင်း၊ စွန့်ပစ်ခံ မသန်စွမ်း ကလေးငယ်များကို မသန်စွမ်း ကလေးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ (ကျိုက်ဝိုင်း) ၌ လည်းကောင်း အသီးသီး စောင့်ရှောက်ထားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖော်ဖော်ဝါရီလတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ သိရသည့် ကိန်းဂဏန်းများ အရ ရွေဂုံတိုင် ကလေးပြုစုရေး ဌာနတွင် ကလေးငယ်ပေါင်း ၈၅ ဦး၊ လူငယ်သင်တန်းကျောင်း (ကျိုက်ဝိုင်း) တွင် ၁၂၀ ဦး၊ အမျိုးသမီးကလေးများ သင်တန်းကျောင်း (မလိခ) တွင် ၁၃၁ ဦး၊ မသန်စွမ်း ကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ (ကျိုက်ဝိုင်း) တွင် ၆၅ ဦး စုစုပေါင်း ၄၀၁ ဦး ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိဘမဲ့ ဂေဟာများ တွင် နေထိုင်သည့် ကလေးငယ်များ၏ ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် မိဘအရင်း တဦး (သို့မဟုတ်) နှစ်ဦးစလုံး ရှိကြသည်။ ယင်း ကလေးများသည် မိဘတို့၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ အရည်အသွေးမီ ပညာရေး မရရှိမှု၊ တရားဥပဒေနှင့် ရင်ဆိုင်နေရမှု အပြင်၊ စွန့်ပစ်ခံရမှုများကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ မိဘမဲ့ ဂေဟာများတွင် နေထိုင်ကြရသည် ဟု UNICEF ၏ ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနသည် အသက် ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များကို သားသမီး အဖြစ်မွေးလိုသည့် ဆန္ဒရှိသူများ အား အသက် ၅၀ နှစ်အောက် ဇနီးမောင်နှံများ ဖြစ်ခြင်း၊ သားသမီးရတနာ မရနိုင်ကြောင်း ဆရာဝန်၏ ထောက်ခံချက်၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း စသည့် အချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက စမ်းသပ် ကာလ ၆ လနှင့် အဆင်ပြေပါက စာချုပ်စာတမ်းဖြင့် ရာသက်ပန် မွေးစားခွင့် ခွင့်ပြုပေးလျက် ရှိသည်။
ကလေး၏ အသက်သည် ၅ နှစ် အထက်ဖြစ် ပါက အဆိုပါ သင်တန်းကျောင်းများ သို့ အသီးသီး ရောက်ရှိသွားကာ နိုင်ငံတော်က စောင့်ရှောက်သည့် နိုင်ငံပိုင် ကလေးများ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။
ကလေးသူငယ် ပြုစုရေးဌာနများသည် မည်မျှပင် ကောင်းမွန်သည် ဟု ဆိုစေကာမူ ကောင်းမွန်သော ပတ်ဝန်းကျင်၊ နွေးထွေးသော မိသားစုဘဝထက် ပို၍ ကလေးဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သာလွန်ကောင်း မွန်ခြင်း မရှိဟု ကလေး အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ သဘော တူစာချုပ်၌ ဖော်ပြထားသည်။
ကျိုက်ဝိုင်း လူငယ်သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်း အုပ်ကြီး ဦးစိုးလွင်က “အများစနစ်နဲ့ နေရပြီး၊ မိသားစုနဲ့ နေသလို နေရတာ မဟုတ်တော့ အချိန်စနစ်နဲ့ လုပ်ရတာဖြစ်လို့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ အပိုင်းမှာ အားနည်းကြတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံ ရေးပိုင်းမှာလည်း အားနည်းတယ်။ လူတွေက သူတို့ ကို နှိမ်မလားလို့ တွေးတယ်” ဟု သင်တန်း ကျောင်းတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ရသည့် ကလေးငယ်များ၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို ရှင်းပြသည်။
သူကဆက်လက်၍ “ကလေးတယောက်အတွက် သင်တန်းကျောင်းကတော့ မကောင်းတာ အမှန်ပဲ” ဟု ပြောသည်။
မိဘရင်းချာ မရှိတော့သည့် ကလေးငယ်များကို ရပ်ရွာလူထု အခြေပြုကာ ယာယီထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သည့် Foster Care စနစ်ကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံကြီးများတွင် ကျင့်သုံးလျက် ရှိသည်။
အစ္စလာမ်နိုင်ငံများတွင် အစ္စလာမ် ဥပဒေအရ ကာဖလာ (Khafala) ဟု ခေါ်သည့် မိသားစုတစုက ကလေးအား တသက်လုံး ပြုစုစောင့်ရှောက်သည့် ပုံစံအစဉ်အလာကို ကျင့်သုံးလေ့ရှိပြီး ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး စာချုပ် အပိုဒ် ၂၀ တွင် ထိုကာဖလာ အစီအစဉ်ကို ကလေးအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သော နည်းလမ်းတခု အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် မိဘမဲ့ကလေးများကို အစိုးရက တာဝန်ယူလိုက်ပြီ ဆိုလျှင် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသည့် ထိုကလေးများကို ရာသက်ပန် မွေးစားမည့် မိဘများ မရှိသေးခင် ကာလတွင် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်းရှိ တခြားသော မိသားစု တခုခုတွင် မိသားစုဝင် ပုံစံဖြင့် ယာယီနေထိုင်ခွင့် ရရှိစေရန် ဦးစွာ စီစဉ်ပေးပြီး၊ နေစရိတ်နှင့် စားစရိတ်များကို အစိုးရက ပံ့ပိုးခြင်း၊ ပုံမှန်လာရောက်စစ်ဆေး ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးကြောင်း သိရသည်။
“ယာယီ အိမ်တွေမှာ နေရတဲ့ ကလေးတွေက နေရေးစားရေး ပြေလည်ပေမယ့် ကလေးတယောက် အတွက် လိုအပ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တွေ၊ ပံ့ပိုးမှုတွေကို တကယ် မရကြဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ် ရေးရာ မြှင့်တင်ပေးဖို့ အားနည်း တယ်။ နွေးထွေးမှုကို မရဘူး။ အဲဒီအိမ်တွေကနေ ထွက်ပြေးပြီး လမ်းပေါ်ကို ရောက်ကြတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိတယ်” ဟု အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ဒေါ်ခင်မေဇော်က ပြောပြသည်။
အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်သွားပါက မိဘမဲ့ ကလေးများအား Foster Care အစီအစဉ် ရပ်ဆိုင်းသွားပြီး ထိုကလေးများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များ ဖြစ်ကြကာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ရာဇဝတ်မှုများ ကျူးလွန်ကြောင်း အမေရိကန် အစိုးရက ထုတ်ပြန်သည့် ကိန်းဂဏန်းများအရ သိရသည်။ ထို ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် အလုပ်လက်မဲ့များ ဖြစ်လာ ပြီး အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ကြေးများဖြင့် ဆက်လက်နေထိုင် ကြရကာ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ ဖြစ်လာကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်ခင်မေဇော်က “ယာယီအိမ်တွေကနေ ကြီးပြင်းလာ ပေမယ့် အောင်မြင်သွားတဲ့ သာဓကတွေကတော့ ရှိနေတယ်။ နာမည်ကျော် ဘတ်စကက်ဘော ကစားသမား Alonzo Mourning၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Victoria Rowell တို့ဟာ ယာယီ အိမ်တွေမှာ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ မိဘမဲ့တွေပါ။ အခုတော့ သူတို့ က ယာယီအိမ်တွေမှာ နေနေရတဲ့ မိဘမဲ့တွေကို အစိုးရက ဒီထက်ပိုပြီး အကူအညီပေးဖို့ စနစ်ရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေကို ထောက်ပြနေကြပါတယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောသည်။
မိဘမဲ့ ကလေးငယ်များကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မည့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း နိုင်ငံကြီးတခု၌ ပင်လျှင် မကျင့်သုံးနိုင်သေးဘဲ ဝေဖန်ခံရမှုများ ရှိနေသည်။ အမေရိကန်ရှိ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများက မိသားစု မပြိုကွဲရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ်ရန်၊ မိသားစုများကို ပိုမိုပံ့ပိုးပြီး ကလေးငယ်များကို မိဘမဲ့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရေးများ တွင် အစိုးရက ပိုမိုအာရုံ စိုက်သင့်သည် ဟု ပြောဆိုကြကြောင်း ဒေါ်ခင်မေဇော်က ပြောပြသည်။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု မြင့်မားနေဆဲ နိုင်ငံတခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရပ်ရွာလူထု အခြေပြု စောင့်ရှောက်သည့် စနစ်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် အတွက်ပင် အတားအဆီးနှင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အသိပညာ၊ ငွေကြေးနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းအင်အား စသည့် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ကျိုက်ဝိုင်း လူငယ် သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးစိုးလွင်က ထောက်ပြသည်။
ဦးစိုးလွင်က “အဲဒီ စနစ်က လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ကောင်းမယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေကုန်ကြေးကျ များတယ်။ မိသားစုတွေ ကြားထဲမှာ သွားနေနိုင်ဖို့ အတွက် ရပ်ရွာလူထု အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်တိုင်က အသိပညာ လိုနေတုန်းပဲ။ ဒါကြောင့် အခုချိန်ထိ မလုပ်နိုင်သေး ဘူး။ ကလေးတွေရဲ့ လုပ်အားကို အသုံးချဖို့အတွက် လာခေါ်တဲ့သူပဲ များတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရပ်ရွာလူထုက ဝိုင်းဝန်းတာဝန်ယူ စောင့် ရှောက်သည့် စနစ်များ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် အတွက် အဓိက အခက်အခဲ တခုမှာ လူထု၏ စီးပွားရေး အခြေအနေဖြစ်ပြီး ဌာနအနေနှင့်လည်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အနှံ့ သွားရောက်ကာ နောက်ဆက်တွဲ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန် ဝန်ထမ်းအင်အား အခက်အခဲလည်း ရှိနေသည်။ လုပ်ဆောင်နေရသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အား မမျှတမှုများ ရှိနေသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။
“ရပ်ရွာထဲမှာ အသိပညာပေးမှုတွေ အများကြီး လုပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်။ အခုက မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က သင်တန်းကျောင်းမှာ လာအပ်ပါရစေ ဆိုတာက များနေတုန်းပဲ” ဟု ဦးစိုးလွင်က ပြောသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနနှင့် UNICEF တို့ ပူးပေါင်း၍ သင်တန်းကျောင်းနေ ကလေးသူငယ်များ အား လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း၌ မိသားစုဖြင့် နေထိုင်ရသည့်စနစ် (Home Stay System) ကို စမ်းသပ် ဖူးခဲ့သော်လည်း အားနည်းချက်များ ကြောင့် အောင်မြင်မှု မရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန အနေနှင့်လည်း ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ လူထု အသိပညာပေးရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာနမှ စောင့်ရှောက်ထားသည့် ကလေးငယ်များအား အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်ခင် ကာလတွင် နောက်ကြောင်း ရာဇဝင်ကို စုံစမ်းပြီး အဆက်အသွယ် ရပါက မိဘအုပ်ထိန်းသူထံ ပြန်အပ်ခြင်း၊ အဆက်အသွယ် မရပါက သင့်လျော်သော အလုပ်အကိုင်များ ရှာဖွေပေးကာ ရပ်တည်နေနိုင် ပါက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်တိုင်ဘဝကို ထိန်းကျောင်း စေကြောင်း ကျိုက်ဝိုင်း လူငယ်သင်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ပြောသည်။
“၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က မိဘ ပြန်မတွေ့ဘူး။ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ ပြန်တွေ့တယ်။ ပြန်တွေ့ရင် ပြန်အပ်ပြီး လမ်းပေါ် ပြန်ရောက်မသွားအောင် စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့ ကျောင်းဆက်ထားဖို့ Follow Up ပြန်လုပ်ရတယ်” ဟု ကျောင်းအုပ်ကြီး ဦးစိုးလွင်က ပြောပြသည်။
မိဘအရင်းနှင့် ပြန်ဆုံတွေ့ခွင့် ရသွားသည့် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသော ကလေးငယ်တို့၏ မိသားစုများကို လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးထားသော NGO များက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းငယ်များ ထောက်ပံ့ကူညီပေးသည့် အစီ အစဉ်များလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကျိုက်ဝိုင်း လူငယ်သင်တန်းကျောင်းတွင် ပြုစုစောင့်ရှောက်ထားသည့် ကလေးငယ်များ အတွက် နိုင်ငံတော်က တနေ့လျှင် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် စားစရိတ် ၄၃၂ ကျပ် ၁၀ ပြားနှုန်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင် ကုမ္ပဏီ တခုက ကလေးတဦးလျှင် ကုလားပဲ ၂ ကျပ်သားနှုန်းနှင့် တပတ်လျှင် ကြက်ဥ ၂ လုံး ဖြည့်စွက် ကျွေးမွေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရရှိထားသည့် ပုဂ္ဂလိက မိဘမဲ့ကလေး ဂေဟာများသည်လည်း အစိုးရ၏ သတ်မှတ်နှုန်းထား အတိုင်း ကလေးတဦးအား တနေ့လျှင် ငွေကျပ် ရာဂဏန်းရှိ စားစရိတ် ထောက်ပံ့ကြေး ရရှိကြပြီး အသုံးစရိတ် အများစုမှာ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ၏ ထောက်ပံ့ လှူဒါန်းမှုများဖြင့် ရပ်တည် နေကြရကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ လူမှုဝန်ထမ်း အသိအမှတ် ပြုမထားသော၊ အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှု မရရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများ၊ ခရစ်ယာန် မိဘမဲ့ ဂေဟာများလည်း ရှိနေသေးသည်။
“အဖေ မခေါ်နိုင်တဲ့ ကလေး မွေးလာတော့ စွန့်ပစ်ခဲ့တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဦးပဉ္စင်းတို့ ကျောင်းရှေ့မှာ ကလေးတွေ လာစွန့်ပစ်ခဲ့တာတွေ ရှိဖူးတယ်။ တချို့ကလေးတွေဆိုရင် ပုရွက်ဆိတ်တွေတောင် အုံနေတယ်။ ဦးပဉ္စင်းတို့ ကျောင်းမှာ ဒီကလေးတွေကို တရားဟောလို့ ရလာတဲ့အလှူငွေနဲ့ ကျွေးမွေးစောင့် ရှောက်တယ်” ဟု အသက် ၁၃ လသား အရွယ်မှ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားအရွယ် မိဘမဲ့ ကလေး ငယ်ပေါင်း ၁၆၈ ဦးကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် ထား သည့် ဓမ္မလင်္ကာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (တွံတေး) မှ ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် အရှင်ရေဝတက မိန့်ကြားသည်။
ဆရာတော်၏ ကျောင်းတွင် စောင့်ရှောက်ထား သည့် ကလေးငယ်များ၏ အရေအတွက် ထက်ဝက် ခန့်သည် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ်က တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် မိဘများ ဆုံးပါးခဲ့ကြသည့် သဘာဝ ဘေးဒဏ်ခံ ကလေးငယ်များ ဖြစ်သည်။
“စစ်မက်တွေ၊ သဘာဝဘေးတွေနဲ့ ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးမှုတွေကြောင့် မိဘမဲ့တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေမဖြစ်အောင် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ကိုင်ကြဖို့ လိုပါ တယ်” ဟု ဆရာတော်က ဆက်လက်မိန့်သည်။
သင်တန်းကျောင်းများတွင် ကြီးပြင်း ရှင်သန်ခဲ့ရသည့် ဖြိုးဖြိုးတယောက် အသက် ၅ နှစ်အရွယ်တွင် မိဘအသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့သည်။
“အိမ်ကို ရောက်တော့ ဖေဖေနဲ့ မေမေက သားကို ဘာလို့ အဲဒီကျောင်းမှာ ထားခဲ့တာလဲလို့ အမြဲတမ်း မေးတယ်။ သူက ကလေးတပိုင်း၊ လူကြီးတပိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ သိလည်း သိတတ်တယ်။ မိဘတွေနဲ့ အခုမှ နေရတော့ ချွဲတာကလည်း လွန်ရော” ဟု ဖြိုးဖြိုး၏ မွေးစားမိခင်က ပြောသည်။
လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၏ လက်အောက်ရှိ ရွှေဂုံတိုင် ကလေးပြုစုရေး ဌာနတွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ချိန်မှ ယခုတိုင်အောင် ဖြိုးဖြိုးကဲ့သို့ မိဘအသစ်များ နှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံခွင့်ရသည့် ကလေးငယ်ပေါင်း ၃၀ဝ ကျော်ခန့်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ယခင် ကျောင်းအုပ် ကြီးဟောင်း ဒေါ်ခင်မာအေးထံမှ သိရသည်။
သားသမီးရင်းချာ မရနိုင်တော့သည့် အရွယ်လွန် မွေးစားမိဘများသည် ဖြိုးဖြိုးကို အတိုးချ၍ ချစ်ကြသည်။ လူသစ် ကလေးတယောက် အိမ်သို့ ရောက်ခါစ ကာလများက ထိန်းရခက်ခဲလေမလားဟု စိတ်ပူပင်မိသော်လည်း ယခုတော့ အဆင်ပြေသည် ဟု ဆိုသည်။ ရောက်ခါစ ကာလများက မိဘများကို မျက်စိအောက်က အပျောက်မခံသည့် ဖြိုးဖြိုး သည် ယခုတော့ နေသားတကျ ရှိနေပြီဖြစ်လေသည်။ ။
အရေးကြီးနေရာတွေ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ခွင့်ပြုလိုက်ရင် သမိုင်းဝင်လက္ခလာ ပျောက်နိုင်
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှောင့်နှေးနေပြီး လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုများ ပြည်တွင်းတွင် ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ထုတ်ပြန်
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်များ နှောင့်နှေးမှု အပါအဝင် မြန်မာပြည်တွင်း လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
လေးနှစ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် ဒုက္ခသည် ကိုးသောင်းရှစ်ထောင် နေရပ်မပြန်နိုင်ခြင်းကိုလည်း အစီရင်ခံစာတွင် ထောက်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာ ဒေသများတွင်လည်း လူ့အခွင့်ရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပြီး သုံးနှစ်ကျော်ကြာ ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော် နေရပ်ပြန်လာနိုင်ခြင်း မရှိသေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လူ့အခွင့်ရေးကဏ္ဍ တိုးတက်မှုမရှိခြင်းကို ထောက်ပြထားသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်များ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်များ ဆုံးရှုံးနေမှုများကိုလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။
မြေယာသိမ်းဆည်းခံရမှုတွင် လယ်ယာမြေ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ဖြေရှင်းမှုများထိရောက်မှု အားနည်းခြင်း၊ လယ်ယာမြေ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သော တောင်သူများကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခြင်းများကို ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် Amnesty International အစီရင်ခံစာသည် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်ရေးမြှင့်တင်မှုများ နှောင့်နှေးနေခြင်းကို ထောက်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၀ ကျော်တွင် လူပေါင်း ခုနစ်သန်းကျော် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသည့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ဖော်ထုတ်တားဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းလည်း ဖြစ်သည်။
တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ (ယူပီဒဗလျူစီ) နဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးဖို့အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (အန်စီစီတီ) ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက် မနက်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့မှာ အန်စီစီတီအဖွဲ့ရဲ့ ၃ ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့တွင်း သုံးသပ်ညှိနှိုင်းကြမယ်လို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက ပြောပါတယ်။
“လာမယ့် ၇ ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ဒီကြားထဲ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို သုံးသပ်တယ်။ နောက် တစ်ဆို့နေတဲ့ အချက်အလက်အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ မေးထားတာတွေကို သူတို့ဘက်က တုံ့ပြန်ထားတာရှိတယ်။ အဲ့ဒီအချက်အလက်တွေအပေါ်မှာ ကျနော်တို့က လက်ခံနိုင် မနိုင်၊ နောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြတ်ကျော်မလဲ ဒီဟာတွေကို ကျနော်တို့အတွင်းမှာ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ အဖြေရှာနေတာပါ။”
ယူပီဒဗလျုစီနဲ့ အန်စီစီတီတို့အကြား အဓိက တစ်ဆို့နေတဲ့အချက် ၇ ချက်လောက် ကျန်ရှိနေသေးပြီး နှစ်ဖက်တပ်နေရာချထားရေးကိစရပ်တွေ ပါဝင်တယ်လို့လည်း နိုင်ဟံသာက ပြောပါတယ်။
အန်စီစီတီရဲ့ ၃ ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာက တာဝန်ရှိသူတွေ လာရောက်တက်ရောက်ဖို့ ရှိပြီး မတ်လလယ်ပြန်ကျင်းပဖို့ နှစ်ဘက်သဘောတူထားတဲ့ ၇ ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၇ ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်တခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးဖို့ လိုမယ်လို့လည်း အန်စီစီတီခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက ပြောပါတယ်။
“စောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာ။ သဘောတူညီချက်တွေကို ဘယ်အဖွဲ့ကနေ ဖောက်ဖျက်သလဲဆိုတဲ့ ဟာမျိုး လေ့လာစောင့်ကြည်ဖို့ စောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖွဲ့မလဲ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိမယ်။ လောလောဆယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကိုးကန့်အဖွဲ့ကိစ္စပေါ့လေ။ ဒီကိစ္စကလည်း အာဂျင်တာ တခုအနေနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။”
အခုကျင်းပနေတဲ့ အန်စီစီတီအဖွဲ့တွင်း ဆွေးနွေးပွဲဟာ ၁၇ ကြိမ်မြောက် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ယူပီဒဗလျူစီနဲ့ အန်စီစီတီတို့ရဲ့ နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက ရပ်တန့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး လာမယ့် မတ်လလယ် ရန်ကုန်မှာ နှစ်ဘက်တွေ့ဖို့ သဘောတူထားကြပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ Januaray, 28th,2015
( 50 )မန္တလေး ဆေးရုံကြီး၌ ကင်ဆာကုသမှု အရေအတွက် များပြားလာဟုဆို
( 49 )Myanmar refugees visit UK on lobbying trip
( 48 )ထားဝယ်အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ နှောင့်ယှက် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရ
( 47 )On Chinese Border, Local Activists Lead Fight Against Drug Crime
( 46 )မန်းတိုင်းတွင် ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း သုံးသောင်း ရှစ်ထောင်ကျော် အပ်နှံပြီး
( 45 )Alcoholism meetings deal with hidden challenge
( 44 )သိန္နီမြို့နှင့် ကွမ်းလုံမြို့ကြား လုံခြုံရေးယူနေသည့် တပ်မတော်
( 43 )Authorities Clear Remnants of Michaungkan Protest Downtown
( 42 )ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ၌ တာဝန်ယူမည့် လုံခြုံရေး ရဲဝန်ထမ်းများကို သင်တန်းပေး
( 41 )Reunions and ransoms play out in Rohingya camp's internet hut
( 40 )ရှမ်းပြည် အဖွဲ့ပေါင်းစုံ စည်းဝေး
( 39 )Govt is buying time
( 38 )သပိတ်မှောက် ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်တွေ လွှတ်တော်ကော်မတီနဲ့ ဆွေးနွေး
( 37 )Citywide Art Festival to Celebrate Rangoon’s Heritage
( 36 )စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ကူညီရေး အစီအစဉ် သမ္မတ ကြည့်ရှု
( 35 )Myanmar-Thai cooperation, migrant workers discussed on Bangkok visit
( 34 )ကိုးကန့်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိကြောင်းစွပ်စွဲချက် ဝ နဲ့ မိုင်းလား ငြင်းဆိုကန့်ကွက်
( 33 )Suu Kyi's party drops first hints on plans
( 32 )သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများ လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီနဲ့ တွေ့ဆုံ
( 31 )Kokang boy, 10, dies from landmine blast
( 30 )ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ကရင်ပြည် နယ်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွား
( 29 )Civilians ‘massacred’ in Myanmar
( 28 )တိုက်ခိုက်ခံ စပိန် ခရီးသွားဧည့်သည် ရဲတပ်ဖွဲ့ရှာဖွေနေ
( 27 )Quality Talk?
( 26 )သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ ဆုံမည်
( 25 )Burma Military Wins Rare Praise in War with Ethnic Chinese Rebels
( 24 )စစ်တပ်သိမ်းယူမြေပြန် ရရှိရေး ပေါက်တောင်သူ ၃၀၀ ကျော် ဆန္ဒပြတောင်းဆို
( 23 )Govt Seeks Donations to Restore Bagan’s Ancient Murals
( 22 )ပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး ဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း ဆွေးနွေး
( 21 )Can Atheistic China Play Conflict Mediator in ‘God’s Century’?
( 20 )သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ယာဉ်တန်းကို နမ့်ခမ်းဒေသခံများ ဟန့်တား
( 19 )Exiled Singer to Give First Concert in Burma in Two Decades
( 18 )နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ လွှတ်ပေးဖို့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့မှာ တောင်းဆို ဆန္ဒပြ
( 17 )Festival celebrating womanhood to open in Rangoon
( 16 )လာမည့်နှစ်တွင် ဆွစ်ဇာလန်က မြန်မာကို သုံးဆတိုး ထောက်ပံ့မည်
( 15 )Spanish Tourist Hospitalized After Mugging in Pegu
( 14 )ထားဝယ်မြေသိမ်းမှု တောင်သူ ၉ ဦးနဲ့ ကျောင်းသား ၅ ဦး တရားစွဲဆိုခံရ
( 13 )National Sangha Committee Rejects Education Reform Demands
( 12 )ကြွက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် ဟင်္သာတ မတ်ပဲတောင်သူများ အရှုံးပေါ်
( 11 )Myanmar Military Wins Rare Praise in War With Ethnic Chinese Rebels
( 10 )တရုတ်ဘဏ်မှ ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ချေးရန် လွှတ်တော်အတည်ပြု
(9)စစ်ပွဲများကြောင့် အမျိုးသမီးထုဘဝ လုံခြုံရေး ပိုမိုဆိုးဝါးနေပြီး စစ်တပ်က ကာကွယ်ပေးရန် လိုအပ်ဟု ဆို
( 8 )လီဆူတိုင်းရင်းသားများ ရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ဆင်နွှဲ
(7)လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲမှ စစ်ရှောင်လာသူ နောက်ဆုံးကျန်ရှိ ဒုက္ခသည် ၁၀၀ ကျော် မန္တလေးသို့ ပြန်ပို့ပြီ
(6)မြန်မာဂျက်လေယာဉ်များ တပ်တော်ဝင်အခမ်းအနားတွင် စွမ်းရည်ပြ
(5)မြောင်းဖော်ရန် မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်း ဖျက်သိမ်းမည်ဟု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြော သပိတ်စခန်း လုံးဝ ဖျက်သိမ်းပေးမည် မဟုတ်ဟုလည်း ဆန္ဒပြသူများကဆို
(4)လောက်ကိုင်ဒေသတွင် ကလေးတဦး မိုင်းနင်း သေဆုံး
(3)ရွှေပြည်သာ အထည်ချုပ်စက်ရုံများမှ လုပ်ခလစာတိုးပေးရေး တောင်းဆိုဆန္ဒပြသူ အလုပ်သမားခေါင်း ဆောင်တစ်ဦး ပုဒ်မ-၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ထပ်မံ အဖမ်းခံရ
(2)မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းရှင်းလင်းခံရ
( 1 )ကျောက်ဆည် တက္ကသိုလ် နှစ်ခုပေါင်းကာ ကျောင်းသား သပိတ်ထောက်ခံ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့
Facebookမှာ တပ်မတော် သရော်ပုံတင်မိတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာတဥ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်ကြီးများကို မထိန်းသိမ်းပါက တိမ်...
သရေခေတ္တရာ ရှေးဟောင်းဇုန်တွင် ကြံစိုက်ရန် မြေထွန်ရာ...
ထိုင်းတောင်ပိုင်း ကော့စမွီတွင် မြန်မာ ၁ ဦး ထပ်မံအ...
ခဲစက္ကူလုပ်ငန်းများ ပြည်ပ သွင်းကုန်ကြောင့် အခက်အခဲေ...
အမြန်လမ်းပေါ်မှ အဝေးပြေးကားကို လေးခွနှင့်ပစ်သူ ဖမ်း...
ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်း ဥပဒေကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပြ...
ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းသည် ကွန်မြူနစ် ...
ဖားအံအကျဉ်းထောင်မှ ၈၈မျိုးဆက်ကရင်ကျောင်းသား ၄ဦး လ...
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တွေ ခန့်တာ ကြိုတင်နေရာဦးသလို ဖြ...
မုံရွာတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားပြီး ကြက်...
ကြက်ဌက်တုပ်ကွေးရောဂါ ရန်ကုန်မြို့ထဲ ၀င်မလာဖို့ ကာက...
အရက်မူးကာ နွားစာလှောင်တဲ မီးရှို့ရာက နေအိမ် ၁၁ လုံး...
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲ ပါဝင်မှုစွပ်စွဲချက် ရုပ်သိမ်းပေးရ...
မော်တော်ကားကို ယွန်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ရွှေဆိုင်းေ...
အစိုးရမေတ္တာပျက်စေရန် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ် ရေးတင်မှုဖြင့် ...
PRစနစ် ဥပဒေကြမ်းထွက်မှသာ ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံး ဆုံး...
လေးလကျော်ကြာသည်အထိ လားရှိုးမြို့မဈေးတွင်း ရွှေဆိုင်...
ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် လမ်းမကြီး နိုင်လွန်ကတ္တရာ...
စပါးအထွက်နည်းလို့ စိုက်ဘဏ်ပြန်ဆပ်ဖို့ လယ်သမားတွေ အ...
လောက်ကိုင် တိုက်ပွဲကြောင့် မူဆယ်-မန္တလေး အဝေးပြေး က...
မဟာဗန္ဓုလ ပန်းခြံဘေးရှိ မိကျောင်းကန် သပိတ်စခန်း ဖြိ...
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ် ကွဲပြ...
ကြွက်ကိုက်ဖြတ် ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် မတ်ပဲ အထွက်နှုန်းကျ...
၈၈ နောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်ခံရမ...
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲကို ဆွေးနွေးဖို့လိုတယ်လို့ NCCTြေ...
အရေးကြီးနေရာတွေ အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံ ခွင့်ပြုလိုက်ရ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်နှောင့်နှေးနေပြီး လူ့အခွင့်ေ...
တနိုင်ငံလုံးအပစ်ရပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ က...
မုံရွာတွင် ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကြောင့် အစုအပြုံလိုက်ေ...
မယ်လဒုက္ခသည်စခန်း အပြင်ဘက်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအလော...
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်မူကြမ်းအပေါ် တွေ့ဆုံဆွေး...
ပုပ္ပားတောင် စပျစ်ခြံဥယျာဉ်ကို နိုင်ငံခြားသားထံ ရော...
အစိုးရတိုက်တွန်းမှုကြောင့် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကြက...
မြန်မာ-အိန္ဒိယ တိုက်ရိုက်ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ချိတ်...
ဓာတ်အားခွဲရုံနှင့် ၅ မိုင်အကွာရှိကျောက်တော်မြို့နယ...
ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့က ပြည်တွင်ြး...
တရုတ်ဘဏ်မှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ချေးငွေကိစ္စဖြင့် သမ၀ါယမဝ...
လွှတ်တော်ကြားနာပွဲကိစ္စ ပြန်ညှိနှိုင်းရန် NNER တောင်း...
တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် လောင်းကစားနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ...
မည်သူမဆို တရုတ်ပိုင်နက်ကိုသုံး၍ မြန်မာနှင့် ဆက်ဆံေ...
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိမှသာ မိုင်းရှင်းမယ်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ အစိုးရတပ် ခြုံခိုတိုက်ခိုက...
ဒေါ်လာ၉ သောင်း တန်ဖိုးရှိ အသည်းရောင်အသားဝါဆေးကို ၆၅...
ပညာရေးဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံရေး လုပ်ခွင့်ကန့်သတ်ရန် မ...
ဘလုတ်ညွှန့်ရပ်ကွက် မီးဘေးသင့်နေအိမ် ၁၃၁လုံး ကိုယ်ထူ...
Open Source Software နဲ့ Hardware လက်တွေ့အသုံးပြု ...
မုံရွာမြို့အနီး ကြက်ငုံးမွေးမြူရေးဇုန်တွင် ကြက်ငှက...
ဖမ်းဆီးထားတဲ့ အလုပ်သမားသပိတ် ခေါင်းဆောင် ၃ဦးကို ရ...
မလေးရှား (MSPP) ၏ ဆီအုန်းစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း ရပ...
စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်း ကြက်ငှက်တွေ သယ်ယူ ဖြတ်သန်းခွ...
လူကိုကူးစက်နိုင်သည့် H5N1 ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ မံ...
အနိမ့်ဆုံးလစာသတ်မှတ်ရေး စစ်တမ်း ကျေနပ်မှုမရှိပါက ကန...
ရခိုင် အမျိုးသားပါတီမှ မြို့နယ်ကော်မတီဝင်အချို့ နု...
စစ်ရှောင်ပြည်သူတချို့ လောက်ကိုင်မှာ ပြန်နေထိုင်နြေ...
ကိုးကန့်တိုက်ပွဲအတွင်း တရုတ်ကြေးစားစစ်သား မပါလို့...
အက်ဖ်အမ်အိုင် လေကြောင်းလိုင်း နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊...
မဲဆောက်ရှိ မြန်မာကျောင်းသားဘော်ဒါဆောင် မီးလောင်၊ေ...
မိကျောင်းကန်သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းပြီး လူ၁၈ယောက် ဖမ်...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တရားစီရင်မှု နှင့် အကျင့်ပျက် ဝန်ထမ်း...
မြောက်ဦးနယ်တွင် ကျွဲ၊ နွား ၁၁ ကောင် တညဉ့်တည်းတွင်...
မုံရွာမြို့မှာ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး ဖြစ်နေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောပွဲနေရာ အား/ကာ ဌာနက ခွင်...
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ တရားစီရင်မှုတွေကို ဆန္ဒပြ
လီဆူတိုင်းရင်းသား ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် လားရှို...
ရွှေတောင်မြို့တွင် လူနာတင်ကားက သစ်ပင်ကို ဝင်တိုက်ကာ...
မြန်မာဘာသာဖြင့် Gmail အသုံးပြုနိုင်ပြီ
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာသတင်းများ Januaray, 27th,2015
လောက်ကိုင်ဒေသတပ်မတော်သားများအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ...
ယာဧက ၁၀၀၀ကျော်စားကျက်မြေသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အပေါ် သူတို့...
ညပိုင်းတွင် အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်သည့် ပြိုင်ကာ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုအတွင်း လူထုအသံ ပါဝင်လာအေ...